ခယျမလေးနဲ့ ခိုးစားခွငျး – My Blog
‘မရဘူး မမေကေမနကျဆိုအစောနိုးဒါ’ ‘အငျးပါ’ ‘အ့ဆို အိပျတော့မယျနျော’ ‘အငျးကိုကို ကလောသှားတော့ တူတူသှားမယျနျော’ ‘အငှးပါ အာဘှားးးးးးးးးမှ””””’ ဆိုပီး သူဇာပါးစပျကိုအနမျးပေးကာ အိပျဖိုထှကျသှားခဲ့သညျ ဒီလိုနကျ နောကျတဈနမေ့နကျတှငျ မနကျစာအတူစားခြိနျ သူဇာမှာ ပုံမှနျမဟုတျပဲ နာနသေညျ့အနထေားဖွငျ့ ပေါငျကား၍ထှကျလာသညျ ထမငျးဝိုငျးသို့ရောကျ ခြိနျ အသငျ့စောငျ့နသေောစိုးမွငျ့သညျ သူ၏ခွထေောကျဖွငျ့သူဇာ အဖုတျကို ထိုးလိုကျသညျ သူဇာမှာ မကျြစောငျးကို ခဈြပွုံး ပွုံး၍ထိုးပီး ရှတျေနသေညျ ဒီလိုနဲ့ စိုးမွငျ့လညျးအိမျပွနျသှားခဲ့ပီး သူဇာလညျး သူမ၏လုပျငနျးခှငျပွနျရောကျလာသညျ ‘မောနငျး အမ’ ‘မောနငျး မောငျလေး’ လာနုတျဆကျနသေော စညျသူဖွိုးကိုကွညျ့ကာ ပွနျလညျနုတျဆကျ လိုကျသညျ နခေ့ငျးထမငျးစားခြိနျ စညျသူဖွိုးနကျ အိမျပွနျလာကာ ထမငျးစားပီး ပွနျထှကျသှားသညျ ဒီလို ဖွငျ့ မလေ ၁၆ရကျညနတှေငျ သူဇာဆီစိုးမွငျ့ဆီက ဖုနျးဝငျလာကာ ‘ညမလေး ဒီညနကေလောသှားမာ လိုကျမလား’ ‘ဟု ဘာအတှကျလညျးခဲအို’ ‘မနကျဖနျဆို မီတငျလေ’ ‘အော ဟု သားပဲ’ ‘အဆငျပွရေငျလာခဲ့မယျလေ ပီးတော့ပွနျချေါလိုကျမယျ’ ‘ခဲအိုက အဆငျပွနေပေီ’ ‘အငျးပါ’ ဒီလိုဖွငျ့စိုးမွငျ့အဆငျပွရေုံ လေးပွောပီးဖုနျးခတြာနကျ အိမျသိုရုတျတရကျပွနျလာပီး ကလောကိုထှကျလာခဲ့သညျ
ကလောရောကျခြိနျ ခဲအိုစိုးမွငျ့ဆီ ‘ကိုကို ဘယျမလဲ မိနျးမခုကလောရောကျနပေီ’ ‘ဟမျ ကလောမှာအဆငျမပွဘေူးမိနျးမ အောငျပနျးပွနျထှကျလာခဲ့’ စိုးးမွငျ့ထံက အကွောငျးပွနျလာတော့ အောငျပနျးပွနျလညျ့ကာ စိုးမွငျ့ရှိရာရောကျလာသညျ စိုးမွငျ့နဲ့ တှခြေိ့နျ စိုးမွငျ့ချေါရာ ဟိုတယျတဈခုသို့လိုကျပါလာခဲ့သညျ’ ‘ကိုကို ဝိုး အမေးဇငျး ဟိဟိ’ အခနျးထဲက ဝနျထမျးမြားအလှဆငျထား သော ဟနျးနီးမှနျး အခနျး အလှကိုကွညျ့ကာ သူဇာ ပြျောနသေညျ ‘မိနျးမ ပြျောလား’ ‘ပြျောတယျ ကိုကို အရမျးခဈြတာပဲ’ ‘ခဈြရငျ ကိုကိုကွိုကျဒါလုပျပေးရမယျ’ ‘ကိုကိုကဘာကွိုကျလို့လညျး’ ‘မသိဘူးလား’ ‘သိတယျ ‘ ‘ အ့ဆို ဘာလညျး’ ‘သူဇာရဲ့အဖုတျမ လား ဟိဟိ’ဟုတိုးတိုးလေးကပျပွောလိုကျခြိနျ ‘အရမျးအလိုကျသိတာပဲ’ ‘မသိဘူး သူဇာတော့ ကိုကိုရဲ့အပွုစုကို စှဲနပေီ’ ‘ဟုလို့ လား’ ‘အငျး ကိုကို ခုတောငျ အိမျကိုဘာမှမပွောပဲ ကိုကိုချေါရာလိုကျလာတာ’ ‘အငျးပါ ကိုကိုလညျး မိနျးမကိုအရငျညထကျ ပိုပီး ပွုစုပေးမယျနျော’ ‘တကယျလား ကိုကို’ ‘တကယျပေါ့ မိနျးမရေ’ ‘ဘယျတော့လညျး ဟငျ’ ‘အခု’ ‘အဆို သူဇာခြှတျပီနျော’ ‘ကိုကိုခြှတျပေးပါ့မယျနျောမိနျးမရေ ‘ ဒီအခြိနျ စိုးမွငျ့သူဇာ အဝတျစားမြားတဈခုခငျြး ခြှတျရငျး ပါးစပျ စုပျနမျးရငျး အစပွုလာကွ သညျ
ထိုနောကျရခြေိုးခနျးဆီ အဝတျစားခြှတျပီး ဝငျလာကွသညျ ရခြေိုးခနျးထဲရောကျခြိနျ သူဇာအဖုတျကိုရဆေေး၍ သူ၏လီးကို သူဇာအား စုပျခိုငျးလိုကျသညျ ‘ပွှတျ ပွှတျ ပွှပျဖှတျကြှတျ’ အသံမွညျအောငျစုပျပေးနသေညျမှာ သူဇာသညျ သာမာနျမိနျးမတို့ ယောကျြားအပျေါပွုစုနသေညျထကျ ပိုလှနျးနသေညျ ‘ပွှတျ ပွှတျ ပွှပျဖှတျကြှတျ’ ‘ပွှတျ ပွှတျ ပွှပျဖှတျကြှတျ’ ‘ပွှတျ ပွှတျ ပွှပျ ဖှတျကြှတျ’ ထိုနောကျ သူဇာ မတျတပျရပျပွနျထလာပီး ပါးစပျမြားစုပျနမျး နသေညျ ပီးတှငျ သူဇာခွထေောကျတဈဖကျကို ရခြေိုး ခနျး ဘကျတကျ ရကေနျပျေါတငျပီး စိုးမွငျ့သညျ သူဇာအဖုတျကို အငမျးမရ စုပျလကျြပေးနသေညျ ‘အှနျး အိုး အား’ ‘အငျး အိုး’ ‘အငျး’ ထိုနောကျ ရခြေိုး showerကိုဖှငျ့ကာ ပနျးထှကျနသေော ရမြေားအောကျ၌ ကာမတဏှာတောကို တိုးဝငျ၍ လိုအငျဆန်ဒဖွညျ့ နကွေသညျ အငျး အငျး အား အား နာတယျ အား အငျး ကြှတျ ဖှတျ အားကြှတျ ‘ဖှတျ ဖှတျ ဖှပျ ပွတျ’ စိုးမွငျ့သညျ ဖွညျးဖွညျး ခငျြး လိုးပေးရငျး သူဇာလညျးဖွညျးဖွညျး ခငျြးစီးမြှောနသေညျ အငျး အငျး အား အငျး အငျး အား အငျး အငျး အား စိုးမွငျ့သညျ သူဇာခါးကိုဖကျ ရငျဘတျကိုလြှာနဲ့လကျြပီး သူဇာအဖုတျကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ဆောငျ့လိုးပေးနသေညျ
သူဇာမှာ သူ၏ခန်ဓာကိုယျကိုကော့ဆနျ့ စိုးမွငျ့ တဈခကျြဆောငျ့တိုငျး ‘အငျး အငျး အား’ အျော၍စီမြေားနသေညျ ထိုနောကျ စိုးမွငျ့ သူဇာခါးကိုဖကျပီး ဖငျကိုသူဖကျလညျ့ကာ အကုနျးလိုကျဆောငျ့ထညျ့နခြေိနျ သူဇာမှာရခြေိုးခနျးနံရံကိုမှီရင အငျး အငျး အား အငျး အငျး အား အငျး အငျး အား အျောနသေညျ ဖွေးဖွေးခငျြးဆောငျ့နရေငျး ပီးတော့မညျ့စိုမွငျ့သညျ သူဇာဖငျကိုသူ၏လကျနဲ့ ဆှဲကိုငျရငျး အခကျြနှဈဆယျကြျော အဆကျမပွတျဆကျတိုကျဆောငျ့လိုကျသညျ ထိုခြိနျ သူဇာသညျ ဖငျအရမျးအောငျ့သဖွငျ့ စိုး မွငျ့ကို နောကျပဈတှနျးကာ ‘အား ဖွေးဖွေးလိုး ကိုကို’ ‘ဖွေးဖွေး အျောရငျး ဖှတျ””’ဆိုပီး စိုးမွငျ့လရညျမြားထှကျကာ သူဇာ အဖုတျမှ အသံမြား ထှကျလာသညျ စိုးမွငျ့သညျ သူ၏လရကေို သူဇာအဖုတျထဲထညျ့ပီး ပီးသှားသဖွငျ့ သူလီးနဲ့သူဇာအဖုတျကိုပါ ဆေးပေးရငျး ပီးခြိနျတှငျ အနမျးမြား မြှဝကော အိပျခနျးထဲပွနျထှကျလာသညျ အိပျခနျးထဲက ခုတငျပျေါ၌လဲခြ၍ ‘ကိုကို’ ‘အငျး မိနျးမရေ’‘ကိုကိုက အမှုတျကောအလကျြကော အလိုးရော ကောငျးတယျ မိနျးမစိတျမခဘြူး’ ‘ဘာလို့လညျး’ ‘အခှငျ့ရတိုငျး လိုးခံ ခငျြလို့’ ‘အော ကိုကိုလညျး မိနျးမအဖုတျကိုစှဲနပေါပီ’ ‘အ့ဆို မိနျးမခံခငျြတိုငျး မအားလညျးလာလိုးပေးရမယျနျော’
‘အငျးပါ’ ဒီလိုနဲ့စိုးမွငျ့နဲ့သူဇာ ရခြေိုးခနျး၌ ပထမအခြီကို ညနေ၇နာရီလောကျကပီး၍ညနစောကိုဟိုတယျတှငျစားကာပွနျဆငျးလာ သညျ အိပျခနျးသို့ရောကျခြိနျ သူဇာသညျစိုးမွငျ့လီးကိုကိုငျပီး အနားယူနကွေသညျ ‘အရမျးကွိုကျတယျလားကိုကိုလီးကို’ ‘အငျး စှဲသှားပီ’ ‘အငျးပါ အနားယူဥူးမယျနျော’ ‘အငျးပါကိုကိုကလညျးနားပါ’ ဒီလိုနကျ သူဇာသညျစိုးမွငျ့လီးထိပျကို လကျလေးနဲ့ ပှတျ လိုကျ အခြောငျးကို ထုလိုကျလုပျပေးနသေညျ ညနေ ၁၀နာရီအခြိနျ စိုးမွငျ့အိပျယာကထပီး ပွနျလိုးကွ၍ တဈညတာကို ပွညျ့စုံ စှာဖွတျသနျးသှားသညျ နောကျတဈနအေ့စညျးဝေးတကျခြိနျ သူဇာသညျ သူမ၏ကားကို ဟိုတယျ၌ထားခဲ့၍ စိုးမွငျ့အနကျအတူ စိုး မွငျ့ကာပျေါ၌ စိုးမွငျ့ရငျဘတျပျေါမှိ ခါးကိုဖကျ အကွိမျကွိမျအနမျးပေးရငျး ကလောမွို့သို့ထှကျသှားသညျ ကလောမီတငျခနျးသို ရောကျခြိနျ နှဈယောကျမကျြနှာခငျြးဆိုငျနပေီး ပွုံးပွ ခဈြပွဖွငျ့တိတျတဈခိုးလေးခိုးခဈြနကွေသညျ ညနရေောကျခြိနျ အောငျပနျး သို့နှဈယောကျသားထှကျလာစဉျ အိမျအကူ ခငျမဆေီကဖုနျးဝငျလာသညျ
‘ဟလို အမ’ ‘အငျး ခငျမဘောလညျးပွော’ စိုးမွငျ့နဲ့ ရိုနရေတဲ့ခဏမှာ ဖုနျးဝငျလာသဖွငျ့ ဒေါသတကွီးဖွဈကာ အသံမာမာဖွငျ့ဖွေ လိုကျခြိနျ ‘မမ အနျတီဘာဖွဈလညျးမသိဘူး အိပျယာထဲမူးလဲနတေယျ’ ‘ဟငျး အ့ဆို ခြောစုကိုချေါလိုကျလေ ‘ ကား ပျေါ၌ပြာယာခတျဖွဈကာ ခြေားစုဆီးဖုနျးချေါ အာကာဆီဖုနျးချေါ အလုပျမြားသှားပီး စိုးမွငျ့နဲ့အနညျးငယျ ခဈြစိတျမနေ့ခေဲ့သညျ ‘မ ရဘူး ကိုစိုး ဒီအိမျပွနျမှ အမနေမေကောငျးလို့တဲ့’ ဒီလိုနဲ့အောငျပနျးကကားယူပီး တောငျပျေါပွနျတကျလာသညျ ညနေ ၆နာရီတှငျ အိမျရောကျတော့ ‘မမေအေဆငျပွလေား ‘ ‘ပွပေါတယျ မူးလဲဒါပါ ခုမှဆေးသောကျဆေးထိုးထားတယျ’ ‘အငျ အမကေလညျး အရမျးအပူပနျကွီးဒါကို’ ဒီလိုနဲ့ ၄၅မိနဈအကွာတှငျစိုးမွငျ့ရောကျလာပီးအကွောငျးစုံမေးကာ ‘ကိုစိုး ဒီည သူဇာအိမျမာစောငျ့အိပျ ပေးလိုကျပါလား’ ‘အငျးရတယျလေ ခြိမ’ ‘စုက အိမျမာကလေးတှနေဲ့ နောကျပီးညရေးညတာဆို ယောကျြားတှရှေိမှအဆငျပွဒေါ’ ‘အငျးပါ အ့ဆို မိနျးမပွနျတော့လေ လိုကျပို့ရဥူးမာလား’ ‘မလိုကါဘူး ကားပဲပေးလိုကျပါ စောသေးဒါပဲ ကိုယျ့ဘာသာပွနျလိုကျမယျ’ ‘အငျးမိနျးမ ဂရုစိုကျပွနျနျော’ အမဖွဈသူခြောစုနဲ့ စိုးမွငျ့ပွောနတောနားထောငျရငျးညမဖွဈသူ သူဇာရငျထဲ ကွိုကျ၍ဒေါသ ထှကျနသေညျ ခြောစုပွနျသှားခြိနျ သူဇာအမမှော အိပျစကျသှားခဲ့သညျ ဒီခြိနျ သူဇာ တံခါးကို ”””” ရုနျး ””ပိတျပီး ခပျမာမာလေး ထှကျသှားကာ အိမျအပွငျဘကျဝရနျတာက တနျးလြားပျေါ၌ထိုငျကာငိုနသေညျ
ခဏအကွာတှငျစိုးမွငျ့ရောကျလာပီး သူဇာနံဘေး၌ထိုငျကာ သူ၏ညာလကျကိုသူဇာဖခုံးပျေါတငျလိုကျသညျ ‘ မိနျးမ ဘာလို့ငိုနေ တာလညျး’ စိုမွငျ့မေးသောအခါ ‘မသိဘူး စိတျဆိုးလို့’ ‘ဘာကိုစိတျဆိုးဒါလညျး’ ‘သူဇာတဈယောကျလုံးရှမှေ့ာ ကိုကိုက မမကို မိနျးမ မိနျးမနဲ့ ခဈြနတော သူဇာခံစားနိုငျမလား’ ‘အော အ့လိုမဟုဘူးလေ ကိုကိုက မမစုကိုမိနျးမလို့ချေါပမေယျ့ ရငျထဲမပါပါဘူး’ ‘ကိုကို့ရငျထဲမှာ သူဇာရှိနပေီးကတညျးက သူဇာဟာကိုကိုမိနျးမပါပဲ’ ‘တကယျပွောဒါလား’ ‘တကယျပါ မိနျးမရေ’ ‘နောကျဆို သူဇာရှမှေ့ာ မချေါပါနဲ့နျော သူဇာကိုခဈြရငျ’ ‘အငျးပါ ဟုပါပီ မငိုနကျတော့နျော ‘ ‘အငျး ကိုကို ‘ ”ကိုကို ပုံပွငျပွောပွ’ လို့သူဇာပွော ခြိနျ သူတို့အပွငျမှာရှိနခြေိနျက လအနညျးငယျသာနပေီး စိုးမွငျ့သညျ သူ၏လကျတဈဖကျကိုသူဇာကိုဖကျ ကနျြတဈဖကျက သူဇာ လကျကို ကိုငျကာ ‘မိနျးမရေ လမငျးလေးကိုကွညျ့ပါဥူး ကွညျနူးစရာလေး’ ‘အငျးကိုကို ပုံပွငျပါဆို’ ‘အငျးလေ မိနျးမရေ ပုံပွငျက လမငျးဆီကစတာ’ ‘အငျးအ့ဆိုဆကျပွော’ ‘လသာတဲ့ညတဈညမှာ ခယျမလေးကို ဖကျပီး ခဲအိုဖွဈသူက ခြှေးသိပျနတေယျ အကွောငျးကတော့ ‘ပွောပီးရပျသှားသညျ
‘ကိုကိုဆကျပွောလေ’ ‘ပုံပွငျပွောဖို့စဉျးစားနတေုနျးမိနျးမရေ’ ‘ဟှနျး ဘာမှနျးမသိဘူး တကယျမှတျနတော လူဆိုးကွီး’ ဆိုပီး ခဲအို ရငျခှငျ၌နှဲ့လိုကျသညျ သူဇာသညျ ခဲအိုဖွဈသု စိုးမွငျ့နဲ့တိတျတိတျခိုးနနေရေတာကလှဲ၍ တရားဝငျနနေိုငျဖို့မဖွဈနိုငျမှနျးသိ သျောလညျး ခုလိုတိတျတိတျနေ နရေတာကိုပငျ ကနြေပျနသေညျ တဈဖကျက သူမဆန်ဒဖွညျ့ပေးနသေော စိုးမွငျ့၏တရားဝငျ မယားက အမရငျးခြောစုဖွဈနသေညျ့အပွငျ တူလေးနဲ့တူမလေးမကျြနှာပါ ရှိနဒေါကွောငျ့ပါ သို့ပမေယျ့ ‘ကိုကို ‘ ‘အငျးမိနျးမပွော လေ’ ‘ိမိနျးမကို အမွဲခဈြပေးပါနျော’ ‘အငျးပါ’ ‘မိနျးမလညျး ဒီအကွောငျးတှကေို ဘာမှမဖွဈအောငျ ဂရုစိုကျပါ့မယျ ဒီကွားထဲ တော့ မမမသိခြိနျတှေ အခှငျ့သာခြိနျတှဆေိုဂရုစိုကျပေးပေါ့’ ‘အငျးပါ ဟုပါပီ မိနျးမရေ နညျးနညျးအေးလာပီအထဲဝငျရအောငျ’ 7တောငျပျေါဆိုတော့အနညျးငယျအေးဒါနဲ့ သူဇာလညျး ‘အငျးပါ ကိုကိုသူဇာလညျးအေးလာပီ’ ‘သှားရအောငျလမေိနျးမ’ ‘အငျး ဒါနဲ့ ကိုကို’ ‘အငျးပွောလေ မိနျးမ’ ‘မိနျးမနညျးနညျးအေးနလေို့ အိမျထဲရောကျရငျဖကျထားပေးနျော’ ‘အငျးပါ မိနျးမစိတျတိုငျးကဖြွဈစေ ရမယျ’သူတိုအိမျထဲပွနျဝငျလာကွပီး ကိုယျစီ မှယေ့ာစောငျမြားသယျကာ သူဇာအမဘေေး၌ အတူစောငျ့နဖေို့ အမဖွေဈသူ အခနျးထဲဝငျလာသညျ
အမဖွေဈသူက ခုတငျပျေါ၌အိပျစကျနခြေိနျ သူဇာနဲ့ခဲအိုစိုးမွငျ့တို့မှာ ခုတငျဘေး၌စောငျတဈထညျတညျးအတူခွုံကာ ပှေးဖကျရငျး စကားတှပွေောအလှမျးသယျနကွေသညျ ည ၁၀ခှဲခြိနျတှငျစကားပွောရငျး စိုးမွငျ့သညျ သူဇာရငျသား နို့ကိုဆုတျကိုငျလိုကျသညျ ‘အား ကိုကို’ ‘နာသှားလားမိနျးမ’ ‘မဟုတျပါဘူး ကောငျးလို့ပါ ဟိဟိ’ ခါတိုငျးဆို အမစေကားအရမျးနားထောငျလရှေိ့သော သူဇာ သညျ ခုဆို အမဖွေဈသူအခနျးက အမခေု့တငျဘေးတှငျ ခဲအိုဖွဈသူ စိုးမွငျ့ဖွငျ့ ကာမအာရုံတဏှာတောကို မှပြေ့ျောနသေညျ ‘မိနျးမ ကောငျးလား’ ‘အငျး ကိုကို’ ‘အ့ဆို အကွိုကျ ဆုတျနှယျပေးမယျနျော’ ‘အငျး ကိုကိုသဘော’ သူဇာအဖွတှေငျ စိုးမွငျ့အားမ ရဖွဈလာပီး သူဇာအင်ျကြီကွယျသီးမြား ဖွုတျကာ နူးညံ့နသေော လတျလတျဆတျဆတျအပြိုကွီးနို့ကို အားပါပါလေး ဆုတျကိုငျ ပေးလိုကျသညျ ‘အား ကိုကို မိနျးမထနျနပေီ””’ ဟုပွောပီး စိုးမွငျ့ပါးစပျကို လှမျးစုပျလိုကျသညျ ‘ကိုကိုခဏနလေိုးပေးမယျနျော’ ‘အငျး ဖွေးဖွေးလိုးပေးနျော ကိုကို ဘေးမှာမမေရှေိလို့ ဘသူမှမရှိတဲ့ခြိနျမှ စိတျကွိုကျလိုးနျော’
‘အငျးပါ မိနျးမရေ ကိုကိုလညျးထနျနပေီ’ ‘အ့ဆို ဘာလုပျနလေညျး’ သူဇာပွောလိုကျခြိနျ မကျြနှာမြား လနျးဆနျးသှားကာ သူဇာဆီ က စကားက စိုးမွငျ့ကို ကောငျးမှနျစှာဆှဲဆောငျလိုကျသညျ ဘဝအတှကွေုံ့ထဲဆှဲဆောငျခွငျးတှထေဲမှာ သူဇာဆီက ”””အ့ဆို ဘာ လုပျနလေညျး””’ ဆိုတဲ့အသံက ပို၍အားဖွဈစခေဲ့သညျ ထိုနောကျ သူဇာကိုပကျလကျအနထေားအိပျခိုငျးပီး အပျေါကနေ၍ သူ၏ပုဆိုးနဲ့စီတီဘောငျးဘီခြှတျပီး သူဇာပေါငျကွားဝငျကာ သူဇာ၏ထမိနျကို အပျေါလို လနျတကျလိုကျသညျ ထိုခြိနျ သူဇာ ပငျတီ မဝတျထားဒါ တှသေ့ဖွငျ့ ‘မိနျးမ ခဈြတုနျး ပငျတီမပါဘူးရျော’ ‘စောနားကမှ မှယေ့ာယူတုနျးက ခြှတျခဲ့ဒါ အခွနေကေို ကွိုသိလို့’ ‘ဟာ အရမျးအလိုကျသိဒါပဲ ခဈြလိုကျဒါ’ ‘ခဈြတယျဆို အဆုံးထိပို့ပေး’ ဟုပီလား ‘စိတျတိုငျးကဖြွဈစရေမယျ””’ပွောပီး စောငျခွုံ၍ဖွညျ့ဖွညျ့ခငျြးဆောငျ့ ထညျ့ပေးနသေညျ ”’အငျး အငျး အား အငျး အငျး အား အငျး အငျး အား ကောငျးလိုကျဒါ ကိုကို ” ”’အငျး အငျး အား အငျး အငျး အား အငျး အငျး အား ကိုကို အငျး အငျး အငျး အငျး အငျး အငျး အငျး ကိုကိုလီးက မိနျးမအဖုတျ မှာ ပွညျ့ကွပျနတောပဲ ခံလို့ကောငျးတယျ”’
နောကျဆုံး ၃မိနဈမြှဆကျတိုကျဆကျဆောငျ့ခြိနျ စိုးမွငျ့လီးက အရညျမြား သူဇာအဖုတျထဲ၌ထှကျကာ ပီးသှားခဲ့သညျ ‘ကိုကို ကောငျးလားဟငျ ‘ ‘ကောငျးဒါပေါ့ မိနျးမရေ မိနျးမအဖုတျက လိုးလို့အရမျးကောငျးဒါ မိနျးမကောပီးလား’ ‘ပီးတယျလကေိုကို ဖှတျ ဖှတျနကျ မိနျးမအဖုတျကထှကျတဲ့အသံကို ကိုကိုမကွားလိုကျဘူးလား’ ‘အငျး ကွားတယျလေ’ ‘အငျးလေ အ့ဒါ မိနျးမတို့ပီးလို့ အဖုတျကထှကျလာတဲ့ အရညျ ဗဈြသံတှလေေ’ ‘အငျးပါ ‘ ‘ကိုကို မိနျးမကိုဖကျထားပေးနျော’ ပွောပီး စိုးမွငျ့က သူဇာကိုဖကျ ကာ သူဇာအဖုတျထဲက သူမအဖုတျ ရညျနဲ့စိုးမွငျ့လီးရမြေား စိမျ့ယိုကာ တဈဖွေးဖွေးနဲ့သူမပေါငျပျေါသို့ ယိုထှကျလာသညျ နောကျဆုံးတှငျ အိပျပြျောသှားခဲ့ပီး ၂ခှဲအခြိနျတှငျအမဖွေဈသူက အသံပေးလာသဖွငျ့ထကွညျ့ခြိနျ ဆူဆူးပါခငျြသဖွငျ့ နှဈယောကျ သားတှဲကာ အခနျးထဲ၌ သနျ့ဇငျးအိုး၌ပါစခေဲ့သညျ ထိုနောကျအမဖွေဈသူပွနျအိပျသှားခြိနျ သူဇာမှစိုးမွငျ့ကို အနမျးပေးပီး ဖကျ၍ အိပျပြျောသှားခဲ့သညျ။
အမဖွဈသူခြောစုက ယောကျြားစိုးမွငျ့နဲ့သူဇာတို့အခွနေကေို မထငျထားသညျ့အပွငျ လုပျစရာတှနေဲ့ သတိမထားတော့ပါ သာမာနျ ပဲလှတျထားသညျ နောကျတဈနမေ့နကျ ၁၀နာရီခြိနျ အကိုဖွဈသူ အာကာ ရောကျလာခဲ့သညျ အာကာရောကျခြိနျ စိုးမွငျ့က အလုပျ သှားပီး သူ၏အိမျပွနျကာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျသညျ အမဖွေဈသူအခွအေနကွေညျ့ကာ အာကာ ညနေ၅နာရီအခြိနျတှငျ ပွနျသှားခဲ့ သညျ ထိုနောကျစိုးမွငျ့ပွနျရောကျလာပွနျသညျ အိမျကူ ခငျမမှော အာကာနကျလမျးကွုံလိုကျပါသှားခဲ့သညျ ဒီလိုဖွငျ့ အမနေပွေနျ ကောငျးလာသညျ့အခြိနျထိ တဈပတျလုံးလုံး သူဇာနဲ့စိုးမွငျ့တို့တိတျတိတျလေးခဈြဇာတျလမျးခငျး နကွေသညျ တဈပါတျပွညျ့လို့ အမနေပွေနျကောငျးလာတော့ သူဇာအလုပျ ပွနျဝငျကာ လုပျငနျးပွနျလညျပတျနသေညျ အလုပျထဲ၌အလုပျလုပျရငျးသူဇာ စိတျ ပငျးပနျးဒါနဲ့ စာအုပျတဈအုပျကို ယူဖတျလိုကျခြိနျ ယောကျြားမြားနဲ့အတူနပေီး ရှောငျးရှားစရားမြားနဲ့ ဖွဈတတျသညျ့ပွဿနာမြား ကို ဖတျမိသဖွငျ့ ခဲအိုဖွဈသူ စိုးမွငျ့နဲ့အတူနခေဲ့ခွငျးကို စိတျမခပြဲဖွဈလာသညျ
သို့ဖွဈကာ သူမအရမျးရငျးနှီးသော သူနာပွု မိတျဆှသေီရိဆီ ခဏခဏသှားကာ ဆေးစဈခွငျး ကိုယျဝနျရှိနိုငျမရှိနိုငျစဈဆေးခွငျးကို တဈရကျခွား သှားစဈနရေသညျ နောကျဆုံးတှငျ သူနာပွုမိတျဆှသေိရိက ဆေးတှသေုံးစှဲတာထကျ အိမျထောငျပွုဒါက ပို၍သငျ့တျောကွောငျးအကွံပွုလာသဖွငျ့ ဝခှေဲမရသညျ့နောကျဆုံး အလုပျက စာရေးဝနျထမျး စညျသူဖွိုးကို လကျထပျဖို့ဆုံးဖွတျ လိုကျသညျ နောကျတဈနတှေ့ငျ ရုံးခနျးသို့စညျသူဖွိုးကိုချေါပီး ‘မောငျလေး ဆိုငျသှားရအောငျ’ ‘ဟုအမ’ ဒီလိုနကျကားမောငျး ကာ သူဇာနဲ့ စညျသူဖွိုး ပနျးခွံတဈခုက အအေးဆိုငျမှာထိုငျးစကားခြီးလိုကျသညျ ‘မောငျလေး ဟိုတဈခါက အမကို ပွောခဲ့တဲ့ စကားကအတညျလား’ ‘ဘာကိုလညျးအမ’ ‘မောငျလေးသာ အမကိုခှငျ့ပနျရငျအမလကျခံမလားဆိုဒါလေ’ ‘အငျးလအေမ’ ‘အမ သာ လကျခံမှာဆို မောငျလေး ယူနိုငျလို့လား အမက အသကျ၃၆ကြျောလာပီ’ ‘မောငျလေးလညျးမငယျတော့ပါဘူး အမှနျတိုငျးပွော ရငျ မမသာ လကျခံရငျ ကနြျောယူနိုငျပါတယျ’ ‘ဒါဆို မောငျလေး လကုနျရငျအမကို လကျထပျလကျစှပျတဈကှငျး ဝယျပီး လကျထပျခှငျ့တောငျးပါ’
‘ဟုအမ’ ဒီကွားထဲစကားတှအေမြားပွောပီး စညျသူဖွိုးကတော့ပြျောပြျောကွီး ပွနျလာသညျ သူဇာကတော့ စိုမွငျ့ကို ဘယျလို ရငျဆိုငျရမလဲစဉျးစား ရငျး အတှေးပေါငျးစုံဖွငျ့ မကျြနှာမလှမပ့ဖွငျ့ပွနျလာသညျ အိမျရောကျခြိနျတှငျ သူဇာသညျ အမဖွေဈသူထံ ‘အမေ သမီးအိမျထောငျပွုတော့မှာ’ ‘ဘာပွောလိုကျတယျ သမီး ဘာတှလေုပျမလို့လညျး ဒီအတိုငျး ဘဝကိုအဆုံးသတျပါ အမေ လညျးရှိနသေေးဒါ အိမျထောငျမပွုပါနဲ့’ ‘အမသော မရှိရငျသမီးအားကိုးရနျ ပါရမီဖကျလိုတယျလေ’ ‘အော သမီးဘဝအတှကျပဲ သူ မီးတူတှတေူမလေးတှလေညျးရှိနတော သမီးပူစရာမလိုကါဘူး’ အမဆေီကစကားတှပွေောပီး အကိုဖွဈသူ အာကာကိုလညျး အသိပေးအမဖွဈသူခြောစုကိုလညျးအသိပေးခြိနျ ‘ကိုစိုး သူဇာကအိမျထောငျပွုမလို့တဲ့’ ‘ဟမျ ဘသူနဲ့လညျး’ ‘အလုပျထဲစာရေး စညျသူဖွိုးဆိုလား’ ‘နငျတို့ဘယျလိုသဘောရလညျး’ ‘မစုတော့ အမလေိုပဲမပွုဖို့ပွောဒါပဲ ဒါမယျ့သူမသဘောပဲဟာ’ ‘အငျးလေ သူမလညျးခုမှဘလိုဖွဈတာလဲ’ မသိသလို မဖွဈသလိုနဲ့ စိုးမွငျ့စိတျထဲကွိုကျကာ စိတျမကောငျး ဖွဈသှားသညျ အကိုဖွဈသူက လညျး သဘောပေါကျသလောကျရှငျးပွတော့ သူဇာဝခှေဲမရဖွဈကာ သူနာပွုမိတျဆှေ သီရိဆီရောကျလာခဲ့ပွနျ သညျ ‘ဟဲနငျ့ အပွဈကလညျး မိဘတှတေော့စတေနာပေါ့ ဒါမယျ့ တဈခါနှဈခါနဲ့တော့ စိတျပူစရာမလိုပါဘူး ‘ ‘ငါက အခေါကျပေါငျးမနညျးတော့ ဘူး ဒီနကေ့ မလေ၂၇ဆိုတော့ ငါတို့နနေခေဲ့ကွဒါ ၁၆ရကျနကေ့တညျးက နတေို့ငျးမဟုတျပမေယျ့ မကွာခဏဆိုသလောကျပဲ’ ‘ဟဲ့ နငျကဘသူနဲ့နတောလညျး’ ‘ငါ့အကွောငျးနငျပဲသိလို့ငါနငျ့ကိုပဲပွောပွမာ နုတျတော့နုတျလုံပေးပါ
သူငယျခငျြး ‘ ‘အငျးပါ စိတျခပြါ နငျကလညျး’ ‘သူက ငါ့အမယောကျြား ငါခဲအိုနဲ့ပါ’ ပွောပီးမကျြနှာပျေါက မကျြရညျအပေါကျမြား အဆကျမပွတျစီးကနြသေညျ ‘နငျတို့ဘလို ဖွဈသှားကွဒါလညျး’ ‘အလုပျကိစ်စတှနေဲ့ပါ ကလောမှာ အလုပျရှယျယာ အတူလုပျရငျး ခုလိုဖွဈသှားကွဒါ’ ‘အငျးပါ ခုကနငျအိမျထောငျပွုခငျြမပွုခငျြပဲပွောပါဥူး’ ‘အမှနျတိုငျးပွောရရငျ အမဆေန်ဒတှေ အကိုအမဆန်ဒ တှတေော့ဖွညျ့ ပေးခငျြတယျ ဘာမှသာမဖွဈရငျ ငါဒီအတိုငျးပဲနခေငျြတယျပွောပီး ငိုနရှောသညျ’ ‘ဘာမှမပူပါနဲ့သူငယျခငျြး ဒါမြိုး တှေ ဖွဈတတျပါတယျ ပုထုဈာဉျတှပေဲ ငါနားလညျပါတယျ ခုကိစ်စအတှကျမပူပါနဲ့ စိတျခြ ကိုယျဝနျမရအောငျတော့ ငါတာဝနျယူ ပေးပါ့မယျ ‘ပွောပီးသိရိ ခံစားခကျြတှကေို နားလညျပေးသလိုပွောပွနသေညျ ‘နောကျပီး တဈခုက ငါ့ဆီ တဈပါတျတဈခါ ဆေး လာ စဈပါ ဟုပီလား မပူပါနဲ့’ ‘အငျးပါ’ ဒီလိုနဲ့ဆေးထိုး စားဆေးမြားယူပီး ပွနျလာခဲ့သညျ အိမျရောကျလို ဖုနျဖှငျ့ခြိနျ ဖဘှေ့ကျပျေါ က မကျဆငျဂြာမှာ ‘မိနျးမ သူဇာ’ ‘ဘာဖွဈလို့မေးလာတော့ ‘ ‘ကိုကို သူဇာကွောကျတယျ ‘ ဖွလေိုကျတဲ့အခါ
‘ဘာကိုကွောကျဒါ လညျး ‘ ‘မိနျးမ လငျမပျေါပဲကိုယျဝနျရှိသှားကို ကွောကျတယျ’ ‘အော ခုကအဆငျမပွတေော့ဆေးခနျးသှားပွပေါ့’ ‘အငျးလေ ခု လညျးဆေးခနျးကပွနျလာတာ’ ‘ဒါဆို မပူပါနဲ့ အဆငျပွလောမာပါ’ ‘မသိဘူး ကိုကိုပဈသှားမှာလညျးကွောကျဒါ ‘ ‘ပဈမသှားပါဘူး’ ‘ဘာလို့ တဈပါတျပွညျ့ပီလာမတှဒေ့ါလညျး ကိုကိုကပဈထား’ ‘အော အလုပျမြားနလေို့ပါ ဒီကွားထဲသူဇာအိမျထောငျပွုမှာကွား လို့’ ‘ဒါတှကွေောငျ့ ခုလိုဖွဈသှားတာ’ ‘အ့ဆို မပူနဲ့တော့နျော မနကျဖနျဆို ကလောသှားရမှာ အ့တော့မှတှမေ့ယျလနေျော’ ‘အငျးပါ’ ‘ကိုကို အာဘှားပေး’ ပွောရငျးကိုယျစီကဈပေးကာဆငျးသှားကွသညျ နောကျတဈနမေ့နကျတှငျ စိုးမွငျ့သူဇာအိမျရောကျလာပီး ကလောသို့ ထှကျလာသညျ ပုံမှနျတှငျ ကိုယျပိုငျကားကိုယျစီဖွငျ့သှားပမေယျ့ ဒီနတှေ့ငျ စိုးမွငျ့က ခြောစုဆီ ‘မိနျးမ သူဇာကည နအေစောပွနျလာရမာ.
အ့ဒါငါနကျအတူသှားရငျ ပိုအဆငျပွတေယျ’ ဆငျခွပေေးပွောတော့ ‘အငျး ဟုသားပဲ ကိုယျစိုးသှားတော့ ဝငျကွိုသှားလေ မစု ဖုနျးဆကျထားပေးလိုကျမယျ’ ဒီလိုနဲ့အတူသှားဖွဈခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ ခရီးတဈလြှောကျ သူဇာသညျ စိုးမွငျ့ ရငျခှငျ၌မှီကာ မှေးစကျရငျး လိုကျပါလာသညျ 8မနကျပိုငျး မီတငျပီးခြိနျ ဦးထှနျးဝငျးကို ‘အကို သူဇာအမေ ကနြေျာ့ယောကျခမက ကနျြးမာရေး သိပျမကောငျးတော့ ကနြျောတို့ ဒီနတေ့ော့ဒီလောကျပဲအဆုံး သတျရအောငျဗြာ ကနျြတာ နောကျအပတျမှ ဆှေးနှေးကွ ဒါပေါ့’ ‘okပါ အဆငျပွသေလိုပေါ့ ‘ နခေ့ငျး၁၂နာရီခြိနျတှငျ ကလောမွို့က ထှကျလာပီး အရငျကတညျးခဲ့သော အောငျပနျးမွို့ က ဟိုတယျမှာနခေ့ငျးစာစားကာ day useအခနျးတဈခနျးယူပီး နှဈဦးသားကွညျးနူးဖို့ အခနျးဝငျ လာကွသညျ
အခနျးထဲရောကျခြိနျ လကျဆှဲအိတျထဲက ‘ပလတျ ဆှပျ’ ထုတျကာ ခုတငျပျေါသို့ စိုးမွငျ့ပဈခလြိုကျသညျ ‘ကိုကို အ့ဒါဘာလညျး ဟငျ’ ‘အ့ဒါလား ကှနျးတုံးလေ’ ‘ဟမျ အ့ဒါနကျမလုပျခငျြဘူး’ ‘ဘာလို့လညျးမိနျးမ ကာကှယျဖို့အတှကျလေ’ ‘ဟမျ့အမျး မလုပျဘူး ဒီအတိုငျးပဲလိုးကွရအောငျ’ ‘ပွောတော့ကွောကျတယျဆို’ ‘ကွောကျတာတော့ကွောကျဒါပဲ ဒါမယျ့ဒီအတိုငျးပဲခံခငျြတယျ’ ဟု စိုး မွငျ့လကျမောငျးကိုခါရမျးကာ ‘နော နောလို့ကိုကို’ဆိုပီးနှဲ့ဆိုးဆိုးနသေညျ ‘အငျးပါ ပီးမှ ဘာညာ မလုပျနဲ့နျော’ ‘အငျးပါ မိနျးမ ဘာသာ ကွညျ့လုပျပါ့မယျ’ နောကျတှငျ အဝတျစားမြားကိုယျစီခြှတျ၍ ကာမဆန်ဒအစပွုလိုကျ သညျ ‘ကိုကို ဒီကွားထဲ မိနျးမတို့မ တှဖွေ့ဈဒါ အတျောကွာသှားဒါပဲ’ ‘ဟုပါ့မိနျးမရေ အရမျးလှမျးသှားဒါပဲ’ ‘မိနျးမရောပဲ နတေို့ငျးမနနေိုငျမထိုငျနိုငျနဲ့’ ‘ဟုလို့လား’ ‘ဟုတယျ ကိုကိုလီးနဲ့အလိုးခံပီးကတညျးက အ့လိုဖွဈသှားဒါ အရမျးစှဲသှားတယျဆို’ ‘အရမျးတတျတာပဲ မှမှ ‘ ဆိုပီးသူဇာကို စိုးမွငျ့ အနမျးပေးလိုကျကာ စိုးမွငျ့သညျ သူဇာပေါငျမှာ လညျပငျးအထိ ဖွေးဖွေးခငျြး လကျြပီး ကာမတောကိုဆှဲချေါနသေညျ ဒီ အခြိနျ အရမျးတောငျးတနသေော သူဇာမှာ သူမကိုယျတိုငျသူမနို့ကိုကိုငျဆုတျ နုတျခမျးကိုကျပီး ‘အငျးအား အား’ အျောရငျးစီးမြော နသေညျ
ပီးတှငျ စိုးမွငျ့သညျ သူမအဖုတျကို ဆာလောငျခြိနျ အစာရ၍ ခင်ျသွမြေ့ား အသားကိုစားနသေကဲ့သို့ ဆှတျ ဆှတျ ဆပျဆပျမွညျ အောငျစုပျလကျြပေးနတောကွောငျ့ သူမလကျဖွငျ့စို့မွငျ့ခေါငျးကိုကိုငျကာ အငျး အား အား ကိုကို အငျး အား ထိုမှ စိုးမွငျ့လီးကို အာရညျမြားထှကျအောငျ အငမျးမရ ဆောငျ့စုပျပေးလိုကျသညျ ထိုနျောတှငျ စိုးမွငျ့သညျ သူဇာလကျဘယျဘကျကိုနောကျကဆှဲ၍ ကနျြတဈဖကျဖွငျ့ ကုတငျကိုထောကျခိုငျးကာ နောကျကဖွငျ့ အကုနျးလိုကျ အတငျးအဆကျမပွတျဆောငျ့လိုးပေးနသေညျ အငျး အငျး အား အငျး အား နာနာဆောငျ့ကိုကို အား အား နာနာဆောငျ့နျော ဖွငျး ၁၅မိနဈခနျ့အကုနျးလိုကျလိုးပီးနောကျ သူဇာကို ပကျလကျအနထေားပွောငျးပီး သူဇာခွထေောကျတဈဖကျတဈခကြို ဖုခုံးပျေါ၌ထမျးကာ ကတငျအောငျကနေ၍ ကုတငျပျေါက သူဇာကို အဆကျမပွတျလိုးပေးနသေညျ နောကျဆုံးတှငျ၁၀မိနဈမြှ ဆကျတိုကျလိုးသဖွငျ့ ကိုယျစီ ”အငျး အား အား ကောငျးတယျ ကို ကို ””’ပွောရငျး မှရေ့ာ၌ပှဖေ့ကျကာအနမျးမြားစှာဖွငျ့ ငွိမျသကျသှားသညျ
ထိုနောကျ ညနေ၎နာရီခြိနျ ပွနျထှကျလာသညျ ကားပျေါ၌ သူဇာသညျ စိုးမွငျ့ကလကျမောငျးကိုဖကျ ရငျခှငျ၌မှေးစကျရငျး အိမျပွနျ ရောကျလာသညျ ဒီလိုနဲ့ မလေ၂၈တှငျ အမဖွေဈသူရုတျတရကျဆုံးသှားသညျ စညျသူဖွိုးမှ လကျထပျဖို့ခှငျ့လာပနျစဉျ သူဇာမှာ အ မဖွေဈသူနာရေးနဲ့ကွုံသှားသဖွငျ့မနေ့ခေဲ့ပီးစညျသူအား တှခှေ့ငျ့ပေးဖို့ ငွငျးဆနျလိုကျသညျ စညျသူကိုယျတိုငျလညျး သူဇာကို အလုပျမြားနတေယျ ထငျကာ ပွနျ လညျ့သှားသညျ ဒီလိုနကျတဈပါတျအပွညျ့တှငျ အလုပျသှားရငျး စညျသူနဲ့စကားပွော ဖွဈရာမှ သူဇာဘကျက ‘ပထမက စဉျးစားပမေယျ့ မိဘတှေ အသိုငျးဝိုငျးတှကွေောငျ့ လကျမခံတော့ဘူး ဒီအတိုငျးပဲဆကျနတေော့မယျ့’ ဆို တဲ့ အကွောငျးပွောလိုကျသညျ သူဇာဆီက ဆငျခွတှေကွေောငျ့ စညျသူဖွိုး အားနာ၍ကတဈကွောငျး သူဇာကလကျမခံတော့ တာကဖွငျ့ တဈကွောငျး အလုပျကထှကျစာတငျကာ ဇှနျလ၂ရကျနမှောတငျ အလုပျထှကျ နားသှားသညျ ‘ဟဲ့ အဆငျမပွလေို့လား’ ဟု ပွောလာသောလဲ့လဲ့အသံကို ‘ဟုပါဘူး သူငယျခငျြးရာ ဒီအတိုငျးပဲ’ဟုဖွလေိုကျသညျ
ဒီလိုနဲ့ အကိုဖွဈသူ၏ အမဖွဈသူခြောစုမိသားစုနဲ့အတူနဖေို့ ဖိအားပေးတိုကျတှနျးသဖွငျ့ သူဇာ အမဖွဈသူခြောစုမိသားစုနကျ အတူနလေိုကျသညျ ဇှနျလ ၅ရကျနမှေ့ာပဲ ခြောစုနဲ့စိုမွငျ့တို့ မိသားစု သူတို့အိမျကိုအငှါးခရြာက ဈတေညျ့၍းရောငျးဖွဈသှား သညျ ထိုနောကျ ညမဖွဈသူ သူဇာအိမျ၌အတူနကွေသညျ သူဇာအိမျအကူ မခေငျကတော့ သူဇာအမဆေုံးပီး အလုပျပွောငျး သှား သညျ နောကျပီးသူတို့ကိုယျတိုငျအိမျအကူမရှာပဲ စားရေး သောကျရေးအတှကျခြောစုကတာဝနျယူကာအတူနသှေားသညျ ဒီလိုနဲ့ စိုး မွငျ့နဲ့ သူဇာတို့တိတျတဈခိုးခဈြနခွေငျးက ခြောစု မရှိခြိနျအလုပျကိစ်စနဲ့အပွငျအတူသှားခြိနျတှေ ခြောစုမီးဖိုခြောငျက အသုံးပွုဖို့ ဈေးသုံးသှားတဲ့အခြိနျတှဆေို လငျမယားကဲ့သို့ နကွေသညျ တဈခါတဈရံအမဖွဈသူရှိနရေငျတောငျ မမွငျရငျမမွငျသလို စိုးမွငျ့ သညျသူဇာဖငျကိုနှိကျခွငျး နို့ဆုတျကိုငျခွငျး အနမျးမြားပေးခွငျးမြား လုပျလရှေိ့သညျ ခြောစုမရှိရငျတော့ အိမျထဲကနရောအနှံ့ သူ တို့ ခဈြရညျလူး၍ လိုးထားတဲ့နရောခညျြးပါ ရခြေိုးခနျးတှေ သနျ့စငျခနျး အမဖွဈသူအိပျခနျး သူဇာအိပျခနျး အိမျဝရံတာ တနျးလြားနဲ့ ကာပါကငျပါမကနျြပေါ့ အလုပျသှားရငျ မိုးခြုပျမှပွနျလရှေိ့ပီး ကားပျေါ၌ပါ ခဈြရညျလူးကွသညျ သူဇာတော့ မိတျဆှေ သူငယျခငျြး သူနာပွုသီရိနဲ့နားလညျမှုယူကာ တဈပါတျတဈခါ ဆေးပုံမှနျစဈနရေသညျ ‘ဟယျ သူဇာနငျ့အဖွဈကလညျး ဝ၌တဈခု ပါလား သူမြားအတှကျ အဖွညျ့ခံဘဝကွီးဟယျ အခွားလူဆိုလညျးတျောသေး ခုဟာက ခဲအိုနဲ့မှဖွဈရတယျ’
‘အငျးငါလညျးနားမလညျတော့ဘူး သူငယျခငျြးရေ သူနဲ့တှနေ့ရေရငျ ငါကိုယျတိုငျက ပြျောနရေတယျ ‘ ဒီလိုနဲ့ သူဇာ အသကျ၄၀ပွညျ့နှဈတှငျ အမဖွဈသူ ခြောစုမှာ ညနပေိုငျး ကလေးကြောငျးဆငျးခြိနျ ကလေးကွိုအသှား၌ မထငျမှတျ ကားအကျစီး ဒငျ့ဖွဈကာ နှလုံးရောဂါအခံဖွငျ့ဆုံးသှားသညျ မင်ျဂလာသတငျးမဟုတျပမေယျ့ သူတို့အတှကျ ဂှငျဖွဈသှားသညျ ခြောစု ရကျလညျဆှမျးကပျတဲ့နမှော အကိုဖွဈသူအာကာပါ ရောကျလာ၍ မထူးတော့ဘူးတူလေးနဲ့တူမလေးမကျြနှာတှထေောကျပီး နငျပဲ သူတို့အမနေရောယူပေးလိုကျပါလို့ အကိုဖွဈသူအာကာက တောငျးဆိုမှုနဲ့ တူလေးနဲ့တူမလေးတို့လညျး ကွညျဖွူကွသဖွငျ့ ၄၀နှဈ ကြျော၍တဈလကြျောတှငျ မင်ျဂလာဆှမျးကပျကာ လငျမယား အဖွဈရောကျရှိသှားခဲ့သညျ သူတို့ လငျမယားဖွဈခြိနျ တူလေး သား ကွီးမှာနိုငျငံခွားသို့ပညာတျောသငျပါသှားခဲ့ပီး သမီးတူမလေးမှာ ရနျကုနျကိုယျပိုငျအထကျတနျးကြောငျး၌ ကိုးတနျးတကျနသေညျ သူတို့၏မင်ျဂလာဦးမှာ သူဇာ၏ ၃၆နှဈကတညျးကဖွဈပမေယျ့ ဒီညဟာ တရာဝငျ အိမျထောငျသညျဘဝ မင်ျဂလာညပေါ့ ‘မိနျးမရေ’ ‘အငျး ကိုကို’ ‘ခဈြလားဟငျ’ ‘ဘယျနှဈခါပွောရမှာလဲ ဘယျတုနျးကခဈြခဲ့တာအသိသိနဲ့’ ‘အငျးပါ ဒီညကမိနျးမရဲ့အခဈြကို ပိုပီး ခံစားခငျြလိုပါ’ ‘အားဆို အာဘှားပေးပါဥူးကိုကို’ ‘အာဘှားမှမှ’ ပေးရငျး အခဈြဇာတျလမျးကို တရားဝငျ နောငျဖှဲ့ကာ ကာမတဏှာ ဖွငျ့ မင်ျဂလာပွုလိုကျသညျ
‘ကိုကို’ ‘အငျး ခဈြဆုံးမိနျးမ’ ‘ခုမှပဲ ပိုပွညျ့စုံသှားတယျ အရငျကဆို မမ မသိအောငျခိုးခဈြခိုးပီး သာယာနရေတာ’ ‘ဟုပ့ မိနျးမရေ မှမှ ခုတော့ စိတျတိုငျးကနြပေီမလား’ ‘အငျးကိုကို ဟိ့ဟိ့’ ဒီလိုနဲ့ မနကျမိုးလငျးလညျးအနမျးတှေ ညနရေောကျလညျး အနမျးတှေ အခြိနျတနျတော့ ခဈြရညျလူးခွငျးတှနေဲ့ ဘဝကို တှေးပူစရာမရှိတော့ပဲ ခယျမလေးနဲ့ခဲအိုတို့ လကျတှဲသှားကွသညျ တဈခြိနျက တားဆေးမြားအသုံးပွုတာမြားခဲ့ဒါကွောငျ့ ရငျသှေး မရှိခဲ့ပမေယျ့ ခယျမလေးနဲ့ခဲအိုအခဈြက ပွညျ့စုံလှနျးနပေါသညျ။ ထိုနောကျ သူဇာသညျအဖနေဲ့အမတေို့ကြေးဇူးကွောငျ့ ခဈြရသောခဲအိုနဲ့ပေါငျးသငျးရခွငျးအတှကျ ကြေးဇူးတငျကွောငျး ရရှေတျရငျး ခဲအိုနဲ့ ခယျမလေးတို့ဇာတျလမျးမှာ တဈခြိနျက လြှို့ဝှကျ၍ခဈြခဲ့ရသမြှ အတိုးခြဲ့ကာ လငျမယားဘဝ၌ အရငျကထကျပို၍ခဈြသှားကွသညျ။
‘မရဘူး မေမေကမနက်ဆိုအစောနိုးဒါ’ ‘အင်းပါ’ ‘အ့ဆို အိပ်တော့မယ်နော်’ ‘အင်းကိုကို ကလောသွားတော့ တူတူသွားမယ်နော်’ ‘အငှးပါ အာဘှားးးးးးးးးမှ””””’ ဆိုပီး သူဇာပါးစပ်ကိုအနမ်းပေးကာ အိပ်ဖိုထွက်သွားခဲ့သည် ဒီလိုနက် နောက်တစ်နေ့မနက်တွင် မနက်စာအတူစားချိန် သူဇာမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ နာနေသည့်အနေထားဖြင့် ပေါင်ကား၍ထွက်လာသည် ထမင်းဝိုင်းသို့ရောက် ချိန် အသင့်စောင့်နေသောစိုးမြင့်သည် သူ၏ခြေထောက်ဖြင့်သူဇာ အဖုတ်ကို ထိုးလိုက်သည် သူဇာမှာ မျက်စောင်းကို ချစ်ပြုံး ပြုံး၍ထိုးပီး ရွေတ်နေသည် ဒီလိုနဲ့ စိုးမြင့်လည်းအိမ်ပြန်သွားခဲ့ပီး သူဇာလည်း သူမ၏လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ရောက်လာသည် ‘မောနင်း အမ’ ‘မောနင်း မောင်လေး’ လာနုတ်ဆက်နေသော စည်သူဖြိုးကိုကြည့်ကာ ပြန်လည်နုတ်ဆက် လိုက်သည် နေ့ခင်းထမင်းစားချိန် စည်သူဖြိုးနက် အိမ်ပြန်လာကာ ထမင်းစားပီး ပြန်ထွက်သွားသည် ဒီလို ဖြင့် မေလ ၁၆ရက်ညနေတွင် သူဇာဆီစိုးမြင့်ဆီက ဖုန်းဝင်လာကာ ‘ညမလေး ဒီညနေကလောသွားမာ လိုက်မလား’ ‘ဟု ဘာအတွက်လည်းခဲအို’ ‘မနက်ဖန်ဆို မီတင်လေ’ ‘အော ဟု သားပဲ’ ‘အဆင်ပြေရင်လာခဲ့မယ်လေ ပီးတော့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်’ ‘ခဲအိုက အဆင်ပြေနေပီ’ ‘အင်းပါ’ ဒီလိုဖြင့်စိုးမြင့်အဆင်ပြေရုံ လေးပြောပီးဖုန်းချတာနက် အိမ်သိုရုတ်တရက်ပြန်လာပီး ကလောကိုထွက်လာခဲ့သည်
ကလောရောက်ချိန် ခဲအိုစိုးမြင့်ဆီ ‘ကိုကို ဘယ်မလဲ မိန်းမခုကလောရောက်နေပီ’ ‘ဟမ် ကလောမှာအဆင်မပြေဘူးမိန်းမ အောင်ပန်းပြန်ထွက်လာခဲ့’ စိုးးမြင့်ထံက အကြောင်းပြန်လာတော့ အောင်ပန်းပြန်လည့်ကာ စိုးမြင့်ရှိရာရောက်လာသည် စိုးမြင့်နဲ့ တွေ့ချိန် စိုးမြင့်ခေါ်ရာ ဟိုတယ်တစ်ခုသို့လိုက်ပါလာခဲ့သည်’ ‘ကိုကို ဝိုး အမေးဇင်း ဟိဟိ’ အခန်းထဲက ဝန်ထမ်းများအလှဆင်ထား သော ဟန်းနီးမွန်း အခန်း အလှကိုကြည့်ကာ သူဇာ ပျော်နေသည် ‘မိန်းမ ပျော်လား’ ‘ပျော်တယ် ကိုကို အရမ်းချစ်တာပဲ’ ‘ချစ်ရင် ကိုကိုကြိုက်ဒါလုပ်ပေးရမယ်’ ‘ကိုကိုကဘာကြိုက်လို့လည်း’ ‘မသိဘူးလား’ ‘သိတယ် ‘ ‘ အ့ဆို ဘာလည်း’ ‘သူဇာရဲ့အဖုတ်မ လား ဟိဟိ’ဟုတိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်ချိန် ‘အရမ်းအလိုက်သိတာပဲ’ ‘မသိဘူး သူဇာတော့ ကိုကိုရဲ့အပြုစုကို စွဲနေပီ’ ‘ဟုလို့ လား’ ‘အင်း ကိုကို ခုတောင် အိမ်ကိုဘာမှမပြောပဲ ကိုကိုခေါ်ရာလိုက်လာတာ’ ‘အင်းပါ ကိုကိုလည်း မိန်းမကိုအရင်ညထက် ပိုပီး ပြုစုပေးမယ်နော်’ ‘တကယ်လား ကိုကို’ ‘တကယ်ပေါ့ မိန်းမရေ’ ‘ဘယ်တော့လည်း ဟင်’ ‘အခု’ ‘အဆို သူဇာချွတ်ပီနော်’ ‘ကိုကိုချွတ်ပေးပါ့မယ်နော်မိန်းမရေ ‘ ဒီအချိန် စိုးမြင့်သူဇာ အဝတ်စားများတစ်ခုချင်း ချွတ်ရင်း ပါးစပ် စုပ်နမ်းရင်း အစပြုလာကြ သည်
ထိုနောက်ရေချိုးခန်းဆီ အဝတ်စားချွတ်ပီး ဝင်လာကြသည် ရေချိုးခန်းထဲရောက်ချိန် သူဇာအဖုတ်ကိုရေဆေး၍ သူ၏လီးကို သူဇာအား စုပ်ခိုင်းလိုက်သည် ‘ပြွတ် ပြွတ် ပြွပ်ဖွတ်ကျွတ်’ အသံမြည်အောင်စုပ်ပေးနေသည်မှာ သူဇာသည် သာမာန်မိန်းမတို့ ယောက်ျားအပေါ်ပြုစုနေသည်ထက် ပိုလွန်းနေသည် ‘ပြွတ် ပြွတ် ပြွပ်ဖွတ်ကျွတ်’ ‘ပြွတ် ပြွတ် ပြွပ်ဖွတ်ကျွတ်’ ‘ပြွတ် ပြွတ် ပြွပ် ဖွတ်ကျွတ်’ ထိုနောက် သူဇာ မတ်တပ်ရပ်ပြန်ထလာပီး ပါးစပ်များစုပ်နမ်း နေသည် ပီးတွင် သူဇာခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ရေချိုး ခန်း ဘက်တက် ရေကန်ပေါ်တင်ပီး စိုးမြင့်သည် သူဇာအဖုတ်ကို အငမ်းမရ စုပ်လျက်ပေးနေသည် ‘အွန်း အိုး အား’ ‘အင်း အိုး’ ‘အင်း’ ထိုနောက် ရေချိုး showerကိုဖွင့်ကာ ပန်းထွက်နေသော ရေများအောက်၌ ကာမတဏှာတောကို တိုးဝင်၍ လိုအင်ဆန္ဒဖြည့် နေကြသည် အင်း အင်း အား အား နာတယ် အား အင်း ကျွတ် ဖွတ် အားကျွတ် ‘ဖွတ် ဖွတ် ဖွပ် ပြတ်’ စိုးမြင့်သည် ဖြည်းဖြည်း ချင်း လိုးပေးရင်း သူဇာလည်းဖြည်းဖြည်း ချင်းစီးမျှောနေသည် အင်း အင်း အား အင်း အင်း အား အင်း အင်း အား စိုးမြင့်သည် သူဇာခါးကိုဖက် ရင်ဘတ်ကိုလျှာနဲ့လျက်ပီး သူဇာအဖုတ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆောင့်လိုးပေးနေသည်
သူဇာမှာ သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုကော့ဆန့် စိုးမြင့် တစ်ချက်ဆောင့်တိုင်း ‘အင်း အင်း အား’ အော်၍စီမျေားနေသည် ထိုနောက် စိုးမြင့် သူဇာခါးကိုဖက်ပီး ဖင်ကိုသူဖက်လည့်ကာ အကုန်းလိုက်ဆောင့်ထည့်နေချိန် သူဇာမှာရေချိုးခန်းနံရံကိုမှီရင အင်း အင်း အား အင်း အင်း အား အင်း အင်း အား အော်နေသည် ဖြေးဖြေးချင်းဆောင့်နေရင်း ပီးတော့မည့်စိုမြင့်သည် သူဇာဖင်ကိုသူ၏လက်နဲ့ ဆွဲကိုင်ရင်း အချက်နှစ်ဆယ်ကျော် အဆက်မပြတ်ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်သည် ထိုချိန် သူဇာသည် ဖင်အရမ်းအောင့်သဖြင့် စိုး မြင့်ကို နောက်ပစ်တွန်းကာ ‘အား ဖြေးဖြေးလိုး ကိုကို’ ‘ဖြေးဖြေး အော်ရင်း ဖွတ်””’ဆိုပီး စိုးမြင့်လရည်များထွက်ကာ သူဇာ အဖုတ်မှ အသံများ ထွက်လာသည် စိုးမြင့်သည် သူ၏လရေကို သူဇာအဖုတ်ထဲထည့်ပီး ပီးသွားသဖြင့် သူလီးနဲ့သူဇာအဖုတ်ကိုပါ ဆေးပေးရင်း ပီးချိန်တွင် အနမ်းများ မျှဝေကာ အိပ်ခန်းထဲပြန်ထွက်လာသည် အိပ်ခန်းထဲက ခုတင်ပေါ်၌လဲချ၍ ‘ကိုကို’ ‘အင်း မိန်းမရေ’‘ကိုကိုက အမှုတ်ကောအလျက်ကော အလိုးရော ကောင်းတယ် မိန်းမစိတ်မချဘူး’ ‘ဘာလို့လည်း’ ‘အခွင့်ရတိုင်း လိုးခံ ချင်လို့’ ‘အော ကိုကိုလည်း မိန်းမအဖုတ်ကိုစွဲနေပါပီ’ ‘အ့ဆို မိန်းမခံချင်တိုင်း မအားလည်းလာလိုးပေးရမယ်နော်’
‘အင်းပါ’ ဒီလိုနဲ့စိုးမြင့်နဲ့သူဇာ ရေချိုးခန်း၌ ပထမအချီကို ညနေ၇နာရီလောက်ကပီး၍ညနေစာကိုဟိုတယ်တွင်စားကာပြန်ဆင်းလာ သည် အိပ်ခန်းသို့ရောက်ချိန် သူဇာသည်စိုးမြင့်လီးကိုကိုင်ပီး အနားယူနေကြသည် ‘အရမ်းကြိုက်တယ်လားကိုကိုလီးကို’ ‘အင်း စွဲသွားပီ’ ‘အင်းပါ အနားယူဥူးမယ်နော်’ ‘အင်းပါကိုကိုကလည်းနားပါ’ ဒီလိုနက် သူဇာသည်စိုးမြင့်လီးထိပ်ကို လက်လေးနဲ့ ပွတ် လိုက် အချောင်းကို ထုလိုက်လုပ်ပေးနေသည် ညနေ ၁၀နာရီအချိန် စိုးမြင့်အိပ်ယာကထပီး ပြန်လိုးကြ၍ တစ်ညတာကို ပြည့်စုံ စွာဖြတ်သန်းသွားသည် နောက်တစ်နေ့အစည်းဝေးတက်ချိန် သူဇာသည် သူမ၏ကားကို ဟိုတယ်၌ထားခဲ့၍ စိုးမြင့်အနက်အတူ စိုး မြင့်ကာပေါ်၌ စိုးမြင့်ရင်ဘတ်ပေါ်မှိ ခါးကိုဖက် အကြိမ်ကြိမ်အနမ်းပေးရင်း ကလောမြို့သို့ထွက်သွားသည် ကလောမီတင်ခန်းသို ရောက်ချိန် နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်နေပီး ပြုံးပြ ချစ်ပြဖြင့်တိတ်တစ်ခိုးလေးခိုးချစ်နေကြသည် ညနေရောက်ချိန် အောင်ပန်း သို့နှစ်ယောက်သားထွက်လာစဉ် အိမ်အကူ ခင်မေဆီကဖုန်းဝင်လာသည်
‘ဟလို အမ’ ‘အင်း ခင်မေဘာလည်းပြော’ စိုးမြင့်နဲ့ ရိုနေရတဲ့ခဏမှာ ဖုန်းဝင်လာသဖြင့် ဒေါသတကြီးဖြစ်ကာ အသံမာမာဖြင့်ဖြေ လိုက်ချိန် ‘မမ အန်တီဘာဖြစ်လည်းမသိဘူး အိပ်ယာထဲမူးလဲနေတယ်’ ‘ဟင်း အ့ဆို ချောစုကိုခေါ်လိုက်လေ ‘ ကား ပေါ်၌ပျာယာခတ်ဖြစ်ကာ ချေားစုဆီးဖုန်းခေါ် အာကာဆီဖုန်းခေါ် အလုပ်များသွားပီး စိုးမြင့်နဲ့အနည်းငယ် ချစ်စိတ်မေ့နေခဲ့သည် ‘မ ရဘူး ကိုစိုး ဒီအိမ်ပြန်မှ အမေနေမကောင်းလို့တဲ့’ ဒီလိုနဲ့အောင်ပန်းကကားယူပီး တောင်ပေါ်ပြန်တက်လာသည် ညနေ ၆နာရီတွင် အိမ်ရောက်တော့ ‘မေမေအဆင်ပြေလား ‘ ‘ပြေပါတယ် မူးလဲဒါပါ ခုမှဆေးသောက်ဆေးထိုးထားတယ်’ ‘အင် အမေကလည်း အရမ်းအပူပန်ကြီးဒါကို’ ဒီလိုနဲ့ ၄၅မိနစ်အကြာတွင်စိုးမြင့်ရောက်လာပီးအကြောင်းစုံမေးကာ ‘ကိုစိုး ဒီည သူဇာအိမ်မာစောင့်အိပ် ပေးလိုက်ပါလား’ ‘အင်းရတယ်လေ ချိမ’ ‘စုက အိမ်မာကလေးတွေနဲ့ နောက်ပီးညရေးညတာဆို ယောက်ျားတွေရှိမှအဆင်ပြေဒါ’ ‘အင်းပါ အ့ဆို မိန်းမပြန်တော့လေ လိုက်ပို့ရဥူးမာလား’ ‘မလိုကါဘူး ကားပဲပေးလိုက်ပါ စောသေးဒါပဲ ကိုယ့်ဘာသာပြန်လိုက်မယ်’ ‘အင်းမိန်းမ ဂရုစိုက်ပြန်နော်’ အမဖြစ်သူချောစုနဲ့ စိုးမြင့်ပြောနေတာနားထောင်ရင်းညမဖြစ်သူ သူဇာရင်ထဲ ကြိုက်၍ဒေါသ ထွက်နေသည် ချောစုပြန်သွားချိန် သူဇာအမေမှာ အိပ်စက်သွားခဲ့သည် ဒီချိန် သူဇာ တံခါးကို ”””” ရုန်း ””ပိတ်ပီး ခပ်မာမာလေး ထွက်သွားကာ အိမ်အပြင်ဘက်ဝရန်တာက တန်းလျားပေါ်၌ထိုင်ကာငိုနေသည်
ခဏအကြာတွင်စိုးမြင့်ရောက်လာပီး သူဇာနံဘေး၌ထိုင်ကာ သူ၏ညာလက်ကိုသူဇာဖခုံးပေါ်တင်လိုက်သည် ‘ မိန်းမ ဘာလို့ငိုနေ တာလည်း’ စိုမြင့်မေးသောအခါ ‘မသိဘူး စိတ်ဆိုးလို့’ ‘ဘာကိုစိတ်ဆိုးဒါလည်း’ ‘သူဇာတစ်ယောက်လုံးရှေ့မှာ ကိုကိုက မမကို မိန်းမ မိန်းမနဲ့ ချစ်နေတာ သူဇာခံစားနိုင်မလား’ ‘အော အ့လိုမဟုဘူးလေ ကိုကိုက မမစုကိုမိန်းမလို့ခေါ်ပေမယ့် ရင်ထဲမပါပါဘူး’ ‘ကိုကို့ရင်ထဲမှာ သူဇာရှိနေပီးကတည်းက သူဇာဟာကိုကိုမိန်းမပါပဲ’ ‘တကယ်ပြောဒါလား’ ‘တကယ်ပါ မိန်းမရေ’ ‘နောက်ဆို သူဇာရှေ့မှာ မခေါ်ပါနဲ့နော် သူဇာကိုချစ်ရင်’ ‘အင်းပါ ဟုပါပီ မငိုနက်တော့နော် ‘ ‘အင်း ကိုကို ‘ ”ကိုကို ပုံပြင်ပြောပြ’ လို့သူဇာပြော ချိန် သူတို့အပြင်မှာရှိနေချိန်က လအနည်းငယ်သာနေပီး စိုးမြင့်သည် သူ၏လက်တစ်ဖက်ကိုသူဇာကိုဖက် ကျန်တစ်ဖက်က သူဇာ လက်ကို ကိုင်ကာ ‘မိန်းမရေ လမင်းလေးကိုကြည့်ပါဥူး ကြည်နူးစရာလေး’ ‘အင်းကိုကို ပုံပြင်ပါဆို’ ‘အင်းလေ မိန်းမရေ ပုံပြင်က လမင်းဆီကစတာ’ ‘အင်းအ့ဆိုဆက်ပြော’ ‘လသာတဲ့ညတစ်ညမှာ ခယ်မလေးကို ဖက်ပီး ခဲအိုဖြစ်သူက ချွေးသိပ်နေတယ် အကြောင်းကတော့ ‘ပြောပီးရပ်သွားသည်
‘ကိုကိုဆက်ပြောလေ’ ‘ပုံပြင်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတုန်းမိန်းမရေ’ ‘ဟွန်း ဘာမှန်းမသိဘူး တကယ်မှတ်နေတာ လူဆိုးကြီး’ ဆိုပီး ခဲအို ရင်ခွင်၌နွဲ့လိုက်သည် သူဇာသည် ခဲအိုဖြစ်သု စိုးမြင့်နဲ့တိတ်တိတ်ခိုးနေနေရတာကလွဲ၍ တရားဝင်နေနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်မှန်းသိ သော်လည်း ခုလိုတိတ်တိတ်နေ နေရတာကိုပင် ကျေနပ်နေသည် တစ်ဖက်က သူမဆန္ဒဖြည့်ပေးနေသော စိုးမြင့်၏တရားဝင် မယားက အမရင်းချောစုဖြစ်နေသည့်အပြင် တူလေးနဲ့တူမလေးမျက်နှာပါ ရှိနေဒါကြောင့်ပါ သို့ပေမယ့် ‘ကိုကို ‘ ‘အင်းမိန်းမပြော လေ’ ‘ိမိန်းမကို အမြဲချစ်ပေးပါနော်’ ‘အင်းပါ’ ‘မိန်းမလည်း ဒီအကြောင်းတွေကို ဘာမှမဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ့မယ် ဒီကြားထဲ တော့ မမမသိချိန်တွေ အခွင့်သာချိန်တွေဆိုဂရုစိုက်ပေးပေါ့’ ‘အင်းပါ ဟုပါပီ မိန်းမရေ နည်းနည်းအေးလာပီအထဲဝင်ရအောင်’ 7တောင်ပေါ်ဆိုတော့အနည်းငယ်အေးဒါနဲ့ သူဇာလည်း ‘အင်းပါ ကိုကိုသူဇာလည်းအေးလာပီ’ ‘သွားရအောင်လေမိန်းမ’ ‘အင်း ဒါနဲ့ ကိုကို’ ‘အင်းပြောလေ မိန်းမ’ ‘မိန်းမနည်းနည်းအေးနေလို့ အိမ်ထဲရောက်ရင်ဖက်ထားပေးနော်’ ‘အင်းပါ မိန်းမစိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေ ရမယ်’သူတိုအိမ်ထဲပြန်ဝင်လာကြပီး ကိုယ်စီ မွေ့ယာစောင်များသယ်ကာ သူဇာအမေဘေး၌ အတူစောင့်နေဖို့ အမေဖြစ်သူ အခန်းထဲဝင်လာသည်
အမေဖြစ်သူက ခုတင်ပေါ်၌အိပ်စက်နေချိန် သူဇာနဲ့ခဲအိုစိုးမြင့်တို့မှာ ခုတင်ဘေး၌စောင်တစ်ထည်တည်းအတူခြုံကာ ပွေးဖက်ရင်း စကားတွေပြောအလွမ်းသယ်နေကြသည် ည ၁၀ခွဲချိန်တွင်စကားပြောရင်း စိုးမြင့်သည် သူဇာရင်သား နို့ကိုဆုတ်ကိုင်လိုက်သည် ‘အား ကိုကို’ ‘နာသွားလားမိန်းမ’ ‘မဟုတ်ပါဘူး ကောင်းလို့ပါ ဟိဟိ’ ခါတိုင်းဆို အမေစကားအရမ်းနားထောင်လေ့ရှိသော သူဇာ သည် ခုဆို အမေဖြစ်သူအခန်းက အမေ့ခုတင်ဘေးတွင် ခဲအိုဖြစ်သူ စိုးမြင့်ဖြင့် ကာမအာရုံတဏှာတောကို မွေ့ပျော်နေသည် ‘မိန်းမ ကောင်းလား’ ‘အင်း ကိုကို’ ‘အ့ဆို အကြိုက် ဆုတ်နှယ်ပေးမယ်နော်’ ‘အင်း ကိုကိုသဘော’ သူဇာအဖြေတွင် စိုးမြင့်အားမ ရဖြစ်လာပီး သူဇာအင်္ကျီကြယ်သီးများ ဖြုတ်ကာ နူးညံ့နေသော လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အပျိုကြီးနို့ကို အားပါပါလေး ဆုတ်ကိုင် ပေးလိုက်သည် ‘အား ကိုကို မိန်းမထန်နေပီ””’ ဟုပြောပီး စိုးမြင့်ပါးစပ်ကို လှမ်းစုပ်လိုက်သည် ‘ကိုကိုခဏနေလိုးပေးမယ်နော်’ ‘အင်း ဖြေးဖြေးလိုးပေးနော် ကိုကို ဘေးမှာမေမေရှိလို့ ဘသူမှမရှိတဲ့ချိန်မှ စိတ်ကြိုက်လိုးနော်’
‘အင်းပါ မိန်းမရေ ကိုကိုလည်းထန်နေပီ’ ‘အ့ဆို ဘာလုပ်နေလည်း’ သူဇာပြောလိုက်ချိန် မျက်နှာများ လန်းဆန်းသွားကာ သူဇာဆီ က စကားက စိုးမြင့်ကို ကောင်းမွန်စွာဆွဲဆောင်လိုက်သည် ဘဝအတွေ့ကြုံထဲဆွဲဆောင်ခြင်းတွေထဲမှာ သူဇာဆီက ”””အ့ဆို ဘာ လုပ်နေလည်း””’ ဆိုတဲ့အသံက ပို၍အားဖြစ်စေခဲ့သည် ထိုနောက် သူဇာကိုပက်လက်အနေထားအိပ်ခိုင်းပီး အပေါ်ကနေ၍ သူ၏ပုဆိုးနဲ့စီတီဘောင်းဘီချွတ်ပီး သူဇာပေါင်ကြားဝင်ကာ သူဇာ၏ထမိန်ကို အပေါ်လို လန်တက်လိုက်သည် ထိုချိန် သူဇာ ပင်တီ မဝတ်ထားဒါ တွေ့သဖြင့် ‘မိန်းမ ချစ်တုန်း ပင်တီမပါဘူးရော်’ ‘စောနားကမှ မွေ့ယာယူတုန်းက ချွတ်ခဲ့ဒါ အခြေနေကို ကြိုသိလို့’ ‘ဟာ အရမ်းအလိုက်သိဒါပဲ ချစ်လိုက်ဒါ’ ‘ချစ်တယ်ဆို အဆုံးထိပို့ပေး’ ဟုပီလား ‘စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေရမယ်””’ပြောပီး စောင်ခြုံ၍ဖြည့်ဖြည့်ချင်းဆောင့် ထည့်ပေးနေသည် ”’အင်း အင်း အား အင်း အင်း အား အင်း အင်း အား ကောင်းလိုက်ဒါ ကိုကို ” ”’အင်း အင်း အား အင်း အင်း အား အင်း အင်း အား ကိုကို အင်း အင်း အင်း အင်း အင်း အင်း အင်း ကိုကိုလီးက မိန်းမအဖုတ် မှာ ပြည့်ကြပ်နေတာပဲ ခံလို့ကောင်းတယ်”’
နောက်ဆုံး ၃မိနစ်မျှဆက်တိုက်ဆက်ဆောင့်ချိန် စိုးမြင့်လီးက အရည်များ သူဇာအဖုတ်ထဲ၌ထွက်ကာ ပီးသွားခဲ့သည် ‘ကိုကို ကောင်းလားဟင် ‘ ‘ကောင်းဒါပေါ့ မိန်းမရေ မိန်းမအဖုတ်က လိုးလို့အရမ်းကောင်းဒါ မိန်းမကောပီးလား’ ‘ပီးတယ်လေကိုကို ဖွတ် ဖွတ်နက် မိန်းမအဖုတ်ကထွက်တဲ့အသံကို ကိုကိုမကြားလိုက်ဘူးလား’ ‘အင်း ကြားတယ်လေ’ ‘အင်းလေ အ့ဒါ မိန်းမတို့ပီးလို့ အဖုတ်ကထွက်လာတဲ့ အရည် ဗျစ်သံတွေလေ’ ‘အင်းပါ ‘ ‘ကိုကို မိန်းမကိုဖက်ထားပေးနော်’ ပြောပီး စိုးမြင့်က သူဇာကိုဖက် ကာ သူဇာအဖုတ်ထဲက သူမအဖုတ် ရည်နဲ့စိုးမြင့်လီးရေများ စိမ့်ယိုကာ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့သူမပေါင်ပေါ်သို့ ယိုထွက်လာသည် နောက်ဆုံးတွင် အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပီး ၂ခွဲအချိန်တွင်အမေဖြစ်သူက အသံပေးလာသဖြင့်ထကြည့်ချိန် ဆူဆူးပါချင်သဖြင့် နှစ်ယောက် သားတွဲကာ အခန်းထဲ၌ သန့်ဇင်းအိုး၌ပါစေခဲ့သည် ထိုနောက်အမေဖြစ်သူပြန်အိပ်သွားချိန် သူဇာမှစိုးမြင့်ကို အနမ်းပေးပီး ဖက်၍ အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။
အမဖြစ်သူချောစုက ယောက်ျားစိုးမြင့်နဲ့သူဇာတို့အခြေနေကို မထင်ထားသည့်အပြင် လုပ်စရာတွေနဲ့ သတိမထားတော့ပါ သာမာန် ပဲလွှတ်ထားသည် နောက်တစ်နေ့မနက် ၁၀နာရီချိန် အကိုဖြစ်သူ အာကာ ရောက်လာခဲ့သည် အာကာရောက်ချိန် စိုးမြင့်က အလုပ် သွားပီး သူ၏အိမ်ပြန်ကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည် အမေဖြစ်သူအခြေအနေကြည့်ကာ အာကာ ညနေ၅နာရီအချိန်တွင် ပြန်သွားခဲ့ သည် ထိုနောက်စိုးမြင့်ပြန်ရောက်လာပြန်သည် အိမ်ကူ ခင်မေမှာ အာကာနက်လမ်းကြုံလိုက်ပါသွားခဲ့သည် ဒီလိုဖြင့် အမေနေပြန် ကောင်းလာသည့်အချိန်ထိ တစ်ပတ်လုံးလုံး သူဇာနဲ့စိုးမြင့်တို့တိတ်တိတ်လေးချစ်ဇာတ်လမ်းခင်း နေကြသည် တစ်ပါတ်ပြည့်လို့ အမေနေပြန်ကောင်းလာတော့ သူဇာအလုပ် ပြန်ဝင်ကာ လုပ်ငန်းပြန်လည်ပတ်နေသည် အလုပ်ထဲ၌အလုပ်လုပ်ရင်းသူဇာ စိတ် ပင်းပန်းဒါနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ယူဖတ်လိုက်ချိန် ယောက်ျားများနဲ့အတူနေပီး ရှောင်းရှားစရားများနဲ့ ဖြစ်တတ်သည့်ပြဿနာများ ကို ဖတ်မိသဖြင့် ခဲအိုဖြစ်သူ စိုးမြင့်နဲ့အတူနေခဲ့ခြင်းကို စိတ်မချပဲဖြစ်လာသည်
သို့ဖြစ်ကာ သူမအရမ်းရင်းနှီးသော သူနာပြု မိတ်ဆွေသီရိဆီ ခဏခဏသွားကာ ဆေးစစ်ခြင်း ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်မရှိနိုင်စစ်ဆေးခြင်းကို တစ်ရက်ခြား သွားစစ်နေရသည် နောက်ဆုံးတွင် သူနာပြုမိတ်ဆွေသိရိက ဆေးတွေသုံးစွဲတာထက် အိမ်ထောင်ပြုဒါက ပို၍သင့်တော်ကြောင်းအကြံပြုလာသဖြင့် ဝေခွဲမရသည့်နောက်ဆုံး အလုပ်က စာရေးဝန်ထမ်း စည်သူဖြိုးကို လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ် လိုက်သည် နောက်တစ်နေ့တွင် ရုံးခန်းသို့စည်သူဖြိုးကိုခေါ်ပီး ‘မောင်လေး ဆိုင်သွားရအောင်’ ‘ဟုအမ’ ဒီလိုနက်ကားမောင်း ကာ သူဇာနဲ့ စည်သူဖြိုး ပန်းခြံတစ်ခုက အအေးဆိုင်မှာထိုင်းစကားချီးလိုက်သည် ‘မောင်လေး ဟိုတစ်ခါက အမကို ပြောခဲ့တဲ့ စကားကအတည်လား’ ‘ဘာကိုလည်းအမ’ ‘မောင်လေးသာ အမကိုခွင့်ပန်ရင်အမလက်ခံမလားဆိုဒါလေ’ ‘အင်းလေအမ’ ‘အမ သာ လက်ခံမှာဆို မောင်လေး ယူနိုင်လို့လား အမက အသက်၃၆ကျော်လာပီ’ ‘မောင်လေးလည်းမငယ်တော့ပါဘူး အမှန်တိုင်းပြော ရင် မမသာ လက်ခံရင် ကျနော်ယူနိုင်ပါတယ်’ ‘ဒါဆို မောင်လေး လကုန်ရင်အမကို လက်ထပ်လက်စွပ်တစ်ကွင်း ဝယ်ပီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပါ’
‘ဟုအမ’ ဒီကြားထဲစကားတွေအများပြောပီး စည်သူဖြိုးကတော့ပျော်ပျော်ကြီး ပြန်လာသည် သူဇာကတော့ စိုမြင့်ကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ရမလဲစဉ်းစား ရင်း အတွေးပေါင်းစုံဖြင့် မျက်နှာမလှမပ့ဖြင့်ပြန်လာသည် အိမ်ရောက်ချိန်တွင် သူဇာသည် အမေဖြစ်သူထံ ‘အမေ သမီးအိမ်ထောင်ပြုတော့မှာ’ ‘ဘာပြောလိုက်တယ် သမီး ဘာတွေလုပ်မလို့လည်း ဒီအတိုင်း ဘဝကိုအဆုံးသတ်ပါ အမေ လည်းရှိနေသေးဒါ အိမ်ထောင်မပြုပါနဲ့’ ‘အမေသာ မရှိရင်သမီးအားကိုးရန် ပါရမီဖက်လိုတယ်လေ’ ‘အော သမီးဘဝအတွက်ပဲ သူ မီးတူတွေတူမလေးတွေလည်းရှိနေတာ သမီးပူစရာမလိုကါဘူး’ အမေဆီကစကားတွေပြောပီး အကိုဖြစ်သူ အာကာကိုလည်း အသိပေးအမဖြစ်သူချောစုကိုလည်းအသိပေးချိန် ‘ကိုစိုး သူဇာကအိမ်ထောင်ပြုမလို့တဲ့’ ‘ဟမ် ဘသူနဲ့လည်း’ ‘အလုပ်ထဲစာရေး စည်သူဖြိုးဆိုလား’ ‘နင်တို့ဘယ်လိုသဘောရလည်း’ ‘မစုတော့ အမေလိုပဲမပြုဖို့ပြောဒါပဲ ဒါမယ့်သူမသဘောပဲဟာ’ ‘အင်းလေ သူမလည်းခုမှဘလိုဖြစ်တာလဲ’ မသိသလို မဖြစ်သလိုနဲ့ စိုးမြင့်စိတ်ထဲကြိုက်ကာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားသည် အကိုဖြစ်သူက လည်း သဘောပေါက်သလောက်ရှင်းပြတော့ သူဇာဝေခွဲမရဖြစ်ကာ သူနာပြုမိတ်ဆွေ သီရိဆီရောက်လာခဲ့ပြန် သည် ‘ဟဲနင့် အပြစ်ကလည်း မိဘတွေတော့စေတနာပေါ့ ဒါမယ့် တစ်ခါနှစ်ခါနဲ့တော့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး ‘ ‘ငါက အခေါက်ပေါင်းမနည်းတော့ ဘူး ဒီနေ့က မေလ၂၇ဆိုတော့ ငါတို့နေနေခဲ့ကြဒါ ၁၆ရက်နေ့ကတည်းက နေ့တိုင်းမဟုတ်ပေမယ့် မကြာခဏဆိုသလောက်ပဲ’ ‘ဟဲ့ နင်ကဘသူနဲ့နေတာလည်း’ ‘ငါ့အကြောင်းနင်ပဲသိလို့ငါနင့်ကိုပဲပြောပြမာ နုတ်တော့နုတ်လုံပေးပါ
သူငယ်ချင်း ‘ ‘အင်းပါ စိတ်ချပါ နင်ကလည်း’ ‘သူက ငါ့အမယောက်ျား ငါခဲအိုနဲ့ပါ’ ပြောပီးမျက်နှာပေါ်က မျက်ရည်အပေါက်များ အဆက်မပြတ်စီးကျနေသည် ‘နင်တို့ဘလို ဖြစ်သွားကြဒါလည်း’ ‘အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပါ ကလောမှာ အလုပ်ရှယ်ယာ အတူလုပ်ရင်း ခုလိုဖြစ်သွားကြဒါ’ ‘အင်းပါ ခုကနင်အိမ်ထောင်ပြုချင်မပြုချင်ပဲပြောပါဥူး’ ‘အမှန်တိုင်းပြောရရင် အမေဆန္ဒတွေ အကိုအမဆန္ဒ တွေတော့ဖြည့် ပေးချင်တယ် ဘာမှသာမဖြစ်ရင် ငါဒီအတိုင်းပဲနေချင်တယ်ပြောပီး ငိုနေရှာသည်’ ‘ဘာမှမပူပါနဲ့သူငယ်ချင်း ဒါမျိုး တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ပုထုဈာဉ်တွေပဲ ငါနားလည်ပါတယ် ခုကိစ္စအတွက်မပူပါနဲ့ စိတ်ချ ကိုယ်ဝန်မရအောင်တော့ ငါတာဝန်ယူ ပေးပါ့မယ် ‘ပြောပီးသိရိ ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပေးသလိုပြောပြနေသည် ‘နောက်ပီး တစ်ခုက ငါ့ဆီ တစ်ပါတ်တစ်ခါ ဆေး လာ စစ်ပါ ဟုပီလား မပူပါနဲ့’ ‘အင်းပါ’ ဒီလိုနဲ့ဆေးထိုး စားဆေးများယူပီး ပြန်လာခဲ့သည် အိမ်ရောက်လို ဖုန်ဖွင့်ချိန် ဖေ့ဘွက်ပေါ် က မက်ဆင်ဂျာမှာ ‘မိန်းမ သူဇာ’ ‘ဘာဖြစ်လို့မေးလာတော့ ‘ ‘ကိုကို သူဇာကြောက်တယ် ‘ ဖြေလိုက်တဲ့အခါ
‘ဘာကိုကြောက်ဒါ လည်း ‘ ‘မိန်းမ လင်မပေါ်ပဲကိုယ်ဝန်ရှိသွားကို ကြောက်တယ်’ ‘အော ခုကအဆင်မပြေတော့ဆေးခန်းသွားပြပေါ့’ ‘အင်းလေ ခု လည်းဆေးခန်းကပြန်လာတာ’ ‘ဒါဆို မပူပါနဲ့ အဆင်ပြေလာမာပါ’ ‘မသိဘူး ကိုကိုပစ်သွားမှာလည်းကြောက်ဒါ ‘ ‘ပစ်မသွားပါဘူး’ ‘ဘာလို့ တစ်ပါတ်ပြည့်ပီလာမတွေ့ဒါလည်း ကိုကိုကပစ်ထား’ ‘အော အလုပ်များနေလို့ပါ ဒီကြားထဲသူဇာအိမ်ထောင်ပြုမှာကြား လို့’ ‘ဒါတွေကြောင့် ခုလိုဖြစ်သွားတာ’ ‘အ့ဆို မပူနဲ့တော့နော် မနက်ဖန်ဆို ကလောသွားရမှာ အ့တော့မှတွေ့မယ်လေနော်’ ‘အင်းပါ’ ‘ကိုကို အာဘွားပေး’ ပြောရင်းကိုယ်စီကစ်ပေးကာဆင်းသွားကြသည် နောက်တစ်နေ့မနက်တွင် စိုးမြင့်သူဇာအိမ်ရောက်လာပီး ကလောသို့ ထွက်လာသည် ပုံမှန်တွင် ကိုယ်ပိုင်ကားကိုယ်စီဖြင့်သွားပေမယ့် ဒီနေ့တွင် စိုးမြင့်က ချောစုဆီ ‘မိန်းမ သူဇာကည နေအစောပြန်လာရမာ.
အ့ဒါငါနက်အတူသွားရင် ပိုအဆင်ပြေတယ်’ ဆင်ခြေပေးပြောတော့ ‘အင်း ဟုသားပဲ ကိုယ်စိုးသွားတော့ ဝင်ကြိုသွားလေ မစု ဖုန်းဆက်ထားပေးလိုက်မယ်’ ဒီလိုနဲ့အတူသွားဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ခရီးတစ်လျှောက် သူဇာသည် စိုးမြင့် ရင်ခွင်၌မှီကာ မှေးစက်ရင်း လိုက်ပါလာသည် 8မနက်ပိုင်း မီတင်ပီးချိန် ဦးထွန်းဝင်းကို ‘အကို သူဇာအမေ ကျနော့်ယောက်ခမက ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းတော့ ကျနော်တို့ ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲအဆုံး သတ်ရအောင်ဗျာ ကျန်တာ နောက်အပတ်မှ ဆွေးနွေးကြ ဒါပေါ့’ ‘okပါ အဆင်ပြေသလိုပေါ့ ‘ နေ့ခင်း၁၂နာရီချိန်တွင် ကလောမြို့က ထွက်လာပီး အရင်ကတည်းခဲ့သော အောင်ပန်းမြို့ က ဟိုတယ်မှာနေ့ခင်းစာစားကာ day useအခန်းတစ်ခန်းယူပီး နှစ်ဦးသားကြည်းနူးဖို့ အခန်းဝင် လာကြသည်
အခန်းထဲရောက်ချိန် လက်ဆွဲအိတ်ထဲက ‘ပလတ် ဆွပ်’ ထုတ်ကာ ခုတင်ပေါ်သို့ စိုးမြင့်ပစ်ချလိုက်သည် ‘ကိုကို အ့ဒါဘာလည်း ဟင်’ ‘အ့ဒါလား ကွန်းတုံးလေ’ ‘ဟမ် အ့ဒါနက်မလုပ်ချင်ဘူး’ ‘ဘာလို့လည်းမိန်းမ ကာကွယ်ဖို့အတွက်လေ’ ‘ဟမ့်အမ်း မလုပ်ဘူး ဒီအတိုင်းပဲလိုးကြရအောင်’ ‘ပြောတော့ကြောက်တယ်ဆို’ ‘ကြောက်တာတော့ကြောက်ဒါပဲ ဒါမယ့်ဒီအတိုင်းပဲခံချင်တယ်’ ဟု စိုး မြင့်လက်မောင်းကိုခါရမ်းကာ ‘နော နောလို့ကိုကို’ဆိုပီးနွဲ့ဆိုးဆိုးနေသည် ‘အင်းပါ ပီးမှ ဘာညာ မလုပ်နဲ့နော်’ ‘အင်းပါ မိန်းမ ဘာသာ ကြည့်လုပ်ပါ့မယ်’ နောက်တွင် အဝတ်စားများကိုယ်စီချွတ်၍ ကာမဆန္ဒအစပြုလိုက် သည် ‘ကိုကို ဒီကြားထဲ မိန်းမတို့မ တွေ့ဖြစ်ဒါ အတော်ကြာသွားဒါပဲ’ ‘ဟုပါ့မိန်းမရေ အရမ်းလွမ်းသွားဒါပဲ’ ‘မိန်းမရောပဲ နေ့တိုင်းမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့’ ‘ဟုလို့လား’ ‘ဟုတယ် ကိုကိုလီးနဲ့အလိုးခံပီးကတည်းက အ့လိုဖြစ်သွားဒါ အရမ်းစွဲသွားတယ်ဆို’ ‘အရမ်းတတ်တာပဲ မွမွ ‘ ဆိုပီးသူဇာကို စိုးမြင့် အနမ်းပေးလိုက်ကာ စိုးမြင့်သည် သူဇာပေါင်မှာ လည်ပင်းအထိ ဖြေးဖြေးချင်း လျက်ပီး ကာမတောကိုဆွဲခေါ်နေသည် ဒီ အချိန် အရမ်းတောင်းတနေသော သူဇာမှာ သူမကိုယ်တိုင်သူမနို့ကိုကိုင်ဆုတ် နုတ်ခမ်းကိုက်ပီး ‘အင်းအား အား’ အော်ရင်းစီးမျော နေသည်
ပီးတွင် စိုးမြင့်သည် သူမအဖုတ်ကို ဆာလောင်ချိန် အစာရ၍ ခငြေ်္သ့များ အသားကိုစားနေသကဲ့သို့ ဆွတ် ဆွတ် ဆပ်ဆပ်မြည် အောင်စုပ်လျက်ပေးနေတာကြောင့် သူမလက်ဖြင့်စို့မြင့်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ အင်း အား အား ကိုကို အင်း အား ထိုမှ စိုးမြင့်လီးကို အာရည်များထွက်အောင် အငမ်းမရ ဆောင့်စုပ်ပေးလိုက်သည် ထိုနော်တွင် စိုးမြင့်သည် သူဇာလက်ဘယ်ဘက်ကိုနောက်ကဆွဲ၍ ကျန်တစ်ဖက်ဖြင့် ကုတင်ကိုထောက်ခိုင်းကာ နောက်ကဖြင့် အကုန်းလိုက် အတင်းအဆက်မပြတ်ဆောင့်လိုးပေးနေသည် အင်း အင်း အား အင်း အား နာနာဆောင့်ကိုကို အား အား နာနာဆောင့်နော် ဖြင်း ၁၅မိနစ်ခန့်အကုန်းလိုက်လိုးပီးနောက် သူဇာကို ပက်လက်အနေထားပြောင်းပီး သူဇာခြေထောက်တစ်ဖက်တစ်ချကို ဖုခုံးပေါ်၌ထမ်းကာ ကတင်အောင်ကနေ၍ ကုတင်ပေါ်က သူဇာကို အဆက်မပြတ်လိုးပေးနေသည် နောက်ဆုံးတွင်၁၀မိနစ်မျှ ဆက်တိုက်လိုးသဖြင့် ကိုယ်စီ ”အင်း အား အား ကောင်းတယ် ကို ကို ””’ပြောရင်း မွေ့ရာ၌ပွေ့ဖက်ကာအနမ်းများစွာဖြင့် ငြိမ်သက်သွားသည်
ထိုနောက် ညနေ၄နာရီချိန် ပြန်ထွက်လာသည် ကားပေါ်၌ သူဇာသည် စိုးမြင့်ကလက်မောင်းကိုဖက် ရင်ခွင်၌မှေးစက်ရင်း အိမ်ပြန် ရောက်လာသည် ဒီလိုနဲ့ မေလ၂၈တွင် အမေဖြစ်သူရုတ်တရက်ဆုံးသွားသည် စည်သူဖြိုးမှ လက်ထပ်ဖို့ခွင့်လာပန်စဉ် သူဇာမှာ အ မေဖြစ်သူနာရေးနဲ့ကြုံသွားသဖြင့်မေ့နေခဲ့ပီးစည်သူအား တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ ငြင်းဆန်လိုက်သည် စည်သူကိုယ်တိုင်လည်း သူဇာကို အလုပ်များနေတယ် ထင်ကာ ပြန် လည့်သွားသည် ဒီလိုနက်တစ်ပါတ်အပြည့်တွင် အလုပ်သွားရင်း စည်သူနဲ့စကားပြော ဖြစ်ရာမှ သူဇာဘက်က ‘ပထမက စဉ်းစားပေမယ့် မိဘတွေ အသိုင်းဝိုင်းတွေကြောင့် လက်မခံတော့ဘူး ဒီအတိုင်းပဲဆက်နေတော့မယ့်’ ဆို တဲ့ အကြောင်းပြောလိုက်သည် သူဇာဆီက ဆင်ခြေတွေကြောင့် စည်သူဖြိုး အားနာ၍ကတစ်ကြောင်း သူဇာကလက်မခံတော့ တာကဖြင့် တစ်ကြောင်း အလုပ်ကထွက်စာတင်ကာ ဇွန်လ၂ရက်နေမှာတင် အလုပ်ထွက် နားသွားသည် ‘ဟဲ့ အဆင်မပြေလို့လား’ ဟု ပြောလာသောလဲ့လဲ့အသံကို ‘ဟုပါဘူး သူငယ်ချင်းရာ ဒီအတိုင်းပဲ’ဟုဖြေလိုက်သည်
ဒီလိုနဲ့ အကိုဖြစ်သူ၏ အမဖြစ်သူချောစုမိသားစုနဲ့အတူနေဖို့ ဖိအားပေးတိုက်တွန်းသဖြင့် သူဇာ အမဖြစ်သူချောစုမိသားစုနက် အတူနေလိုက်သည် ဇွန်လ ၅ရက်နေ့မှာပဲ ချောစုနဲ့စိုမြင့်တို့ မိသားစု သူတို့အိမ်ကိုအငှါးချရာက ဈေတည့်၍းရောင်းဖြစ်သွား သည် ထိုနောက် ညမဖြစ်သူ သူဇာအိမ်၌အတူနေကြသည် သူဇာအိမ်အကူ မေခင်ကတော့ သူဇာအမေဆုံးပီး အလုပ်ပြောင်း သွား သည် နောက်ပီးသူတို့ကိုယ်တိုင်အိမ်အကူမရှာပဲ စားရေး သောက်ရေးအတွက်ချောစုကတာဝန်ယူကာအတူနေသွားသည် ဒီလိုနဲ့ စိုး မြင့်နဲ့ သူဇာတို့တိတ်တစ်ခိုးချစ်နေခြင်းက ချောစု မရှိချိန်အလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်အတူသွားချိန်တွေ ချောစုမီးဖိုချောင်က အသုံးပြုဖို့ ဈေးသုံးသွားတဲ့အချိန်တွေဆို လင်မယားကဲ့သို့ နေကြသည် တစ်ခါတစ်ရံအမဖြစ်သူရှိနေရင်တောင် မမြင်ရင်မမြင်သလို စိုးမြင့် သည်သူဇာဖင်ကိုနှိက်ခြင်း နို့ဆုတ်ကိုင်ခြင်း အနမ်းများပေးခြင်းများ လုပ်လေ့ရှိသည် ချောစုမရှိရင်တော့ အိမ်ထဲကနေရာအနှံ့ သူ တို့ ချစ်ရည်လူး၍ လိုးထားတဲ့နေရာချည်းပါ ရေချိုးခန်းတွေ သန့်စင်ခန်း အမဖြစ်သူအိပ်ခန်း သူဇာအိပ်ခန်း အိမ်ဝရံတာ တန်းလျားနဲ့ ကာပါကင်ပါမကျန်ပေါ့ အလုပ်သွားရင် မိုးချုပ်မှပြန်လေ့ရှိပီး ကားပေါ်၌ပါ ချစ်ရည်လူးကြသည် သူဇာတော့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း သူနာပြုသီရိနဲ့နားလည်မှုယူကာ တစ်ပါတ်တစ်ခါ ဆေးပုံမှန်စစ်နေရသည် ‘ဟယ် သူဇာနင့်အဖြစ်ကလည်း ဝ၌တစ်ခု ပါလား သူများအတွက် အဖြည့်ခံဘဝကြီးဟယ် အခြားလူဆိုလည်းတော်သေး ခုဟာက ခဲအိုနဲ့မှဖြစ်ရတယ်’
‘အင်းငါလည်းနားမလည်တော့ဘူး သူငယ်ချင်းရေ သူနဲ့တွေ့နေရရင် ငါကိုယ်တိုင်က ပျော်နေရတယ် ‘ ဒီလိုနဲ့ သူဇာ အသက်၄၀ပြည့်နှစ်တွင် အမဖြစ်သူ ချောစုမှာ ညနေပိုင်း ကလေးကျောင်းဆင်းချိန် ကလေးကြိုအသွား၌ မထင်မှတ် ကားအက်စီး ဒင့်ဖြစ်ကာ နှလုံးရောဂါအခံဖြင့်ဆုံးသွားသည် မင်္ဂလာသတင်းမဟုတ်ပေမယ့် သူတို့အတွက် ဂွင်ဖြစ်သွားသည် ချောစု ရက်လည်ဆွမ်းကပ်တဲ့နေမှာ အကိုဖြစ်သူအာကာပါ ရောက်လာ၍ မထူးတော့ဘူးတူလေးနဲ့တူမလေးမျက်နှာတွေထောက်ပီး နင်ပဲ သူတို့အမေနေရာယူပေးလိုက်ပါလို့ အကိုဖြစ်သူအာကာက တောင်းဆိုမှုနဲ့ တူလေးနဲ့တူမလေးတို့လည်း ကြည်ဖြူကြသဖြင့် ၄၀နှစ် ကျော်၍တစ်လကျော်တွင် မင်္ဂလာဆွမ်းကပ်ကာ လင်မယား အဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့သည် သူတို့ လင်မယားဖြစ်ချိန် တူလေး သား ကြီးမှာနိုင်ငံခြားသို့ပညာတော်သင်ပါသွားခဲ့ပီး သမီးတူမလေးမှာ ရန်ကုန်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း၌ ကိုးတန်းတက်နေသည် သူတို့၏မင်္ဂလာဦးမှာ သူဇာ၏ ၃၆နှစ်ကတည်းကဖြစ်ပေမယ့် ဒီညဟာ တရာဝင် အိမ်ထောင်သည်ဘဝ မင်္ဂလာညပေါ့ ‘မိန်းမရေ’ ‘အင်း ကိုကို’ ‘ချစ်လားဟင်’ ‘ဘယ်နှစ်ခါပြောရမှာလဲ ဘယ်တုန်းကချစ်ခဲ့တာအသိသိနဲ့’ ‘အင်းပါ ဒီညကမိန်းမရဲ့အချစ်ကို ပိုပီး ခံစားချင်လိုပါ’ ‘အားဆို အာဘွားပေးပါဥူးကိုကို’ ‘အာဘွားမွမွ’ ပေးရင်း အချစ်ဇာတ်လမ်းကို တရားဝင် နောင်ဖွဲ့ကာ ကာမတဏှာ ဖြင့် မင်္ဂလာပြုလိုက်သည်
‘ကိုကို’ ‘အင်း ချစ်ဆုံးမိန်းမ’ ‘ခုမှပဲ ပိုပြည့်စုံသွားတယ် အရင်ကဆို မမ မသိအောင်ခိုးချစ်ခိုးပီး သာယာနေရတာ’ ‘ဟုပ့ မိန်းမရေ မွမွ ခုတော့ စိတ်တိုင်းကျနေပီမလား’ ‘အင်းကိုကို ဟိ့ဟိ့’ ဒီလိုနဲ့ မနက်မိုးလင်းလည်းအနမ်းတွေ ညနေရောက်လည်း အနမ်းတွေ အချိန်တန်တော့ ချစ်ရည်လူးခြင်းတွေနဲ့ ဘဝကို တွေးပူစရာမရှိတော့ပဲ ခယ်မလေးနဲ့ခဲအိုတို့ လက်တွဲသွားကြသည် တစ်ချိန်က တားဆေးများအသုံးပြုတာများခဲ့ဒါကြောင့် ရင်သွေး မရှိခဲ့ပေမယ့် ခယ်မလေးနဲ့ခဲအိုအချစ်က ပြည့်စုံလွန်းနေပါသည်။ ထိုနောက် သူဇာသည်အဖေနဲ့အမေတို့ကျေးဇူးကြောင့် ချစ်ရသောခဲအိုနဲ့ပေါင်းသင်းရခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ရေရွတ်ရင်း ခဲအိုနဲ့ ခယ်မလေးတို့ဇာတ်လမ်းမှာ တစ်ချိန်က လျှို့ဝှက်၍ချစ်ခဲ့ရသမျှ အတိုးချဲ့ကာ လင်မယားဘဝ၌ အရင်ကထက်ပို၍ချစ်သွားကြသည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ခယျမလေးနဲ့ ခိုးစားခွငျး